လိုးသူ ခံသူ စိတျကွညျဖွူ – My Blog
လိုးသူ ခံသူ စိတျကွညျဖွူ
အိမျမှာ ကြှနျနျော ရယျ ကြှနျနေျာ့ ခယျမလေး သကျမှနျရယျ ကြှနျနေျာ့ ယောကျဖ ရဲ့ မိနျးမ ဇငျဇငျ ရယျ သုံးယောကျပဲ ရှိတယျ ။ ကနျြတဲ့ အိမျသားတှေ အကုနျ ဘုရားဖူး ထှကျသှားကွတယျ ။ ကြှနျတျော က အစိုးရ ဝနျထမျး ခှငျ့မရတာ နဲ့ မလိုကျဖွဈဘူး သကျမှနျနဲ့ဇငျဇငျ က အထညျဆိုငျ မှာ အရောငျးစာရေးမ လုပျနကွေတာ ဆိုတော့ သူတို့ လညျး ခှငျ့မရတာ နဲ့ မလိုကျသှားဖွဈခဲ့ဘူး ။ ဇငျဇငျက သူယောကျကြား ကြှနျနော့ ယောကျဖ စင်ျကာပူ မှာ အလုပျသှားလုပျကတညျးက အိမျမှာ လာနဖွေဈတာ ခွောကျလ လောကျရှိပီ ။ အိမျမှာ နရေငျးနဲ့ပဲ ခယျမလေး သကျမှနျ အလုပျလုပျနတေဲ့ အထညျဆိုငျမှာ အရောငျးဝနျထမျး အဖွဈ သူပါ ဝငျလုပျနတော ။ ခယျမလေး သကျမှနျ က ပိနျပိနျသှယျသှယျ ဇငျဇငျက တော့ သိပျမပိနျဘူး အရမျးလညျး မဝဘူး ။
ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျက ဇငျဇငျက ပိုကွညျ့ကောငျးတယျ ။ တငျတှရေငျတှေ ထှကျတယျ ကွညျ့ကောငျးတယျ ။ သကျမှနျကတော့ နဲ နဲ ပိနျတယျ ဒါပမေယျ့ သကျမှနျနဲနဲခတျေဆနျတယျ အတို အကွပျလေး တှေ ဝတျတတျတယျ ။ ဇငျဇငျကတော့ အိမျထောငျသညျ မို့လားမသိ မွနျမာဝတျစုံ ပဲ အဝတျမြားတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ယောကျဖ နဲ့ ရပီး လေးလကြျောလောကျမှာ ယောကျဖ က ပွညျပ ထှကျ သှားတာ ။ အခု ထိ ငှေ သိပျမပို့နိုငျသေးတော့ ဇငျဇငျလညျး ကြှနျနေျာ့ အိမျမှာ ပဲလာနဖွေဈတယျ ။ အိမျမှာ က မိနျးမရယျ ကြှနျနျော ရယျ ကြှနျနေျာ့ အမေ ရယျ ကြှနျနေျာ့ ညီမရယျ ခယျမလေး သကျမှနျနဲ့ ဇငျဇငျ တို့နကွေတာ ။
အခု ကနျြတဲ့သူတှေ အားလုံး ဘုရားဖူး ထှကျသှားကွတာ ဆယျရကျလောကျကွာမယျ ။ အခု ကြှနျနျောတို့ သုံးယောကျပဲကနျြခဲ့တာ ပေါ့။ လှနျခဲ့တဲ့ သုံးလေးလ လောကျကတညျးက ကြှနျနျော သတိထားမိတာ ကြှနျနေျာ့ ကို ဇငျဇငျ တဈယောကျ အထာတှေ ခငျးကငျြး နသေလိုပဲ ။ လူလဈရငျလဈသလို အကွညျ့တှေ က တမြိုးပဲ ။ ကြှနျနျော လညျး မိနျးမ ရှိပမေယျ့ ဇငျဇငျကို စိတျဝငျစားနမေိတာ ။ လူလဈရငျ ကြှနျနေျာ့ ရှမှေ့ာ ထမိနျ ဖွနျ့ဖွနျ့ ပီး ဝတျပွတာ ခနခန ။ အသကျ ၂၆ ပဲရှိသေးပီး ယောကြား နဲ့ ခန ပဲ တူတူ နလေိုကျရတဲ့ သူ့ အတှကျ တခုခု လိုနမှော ကြှနျနျော သိတာပေါ့ ။ ဒါပမေယျ့ အိမျမှာ က လူက သိပျမလဈဘူး ။ ဒီနေ့ စနနေေ့ ဆိုတော့ ကြှနျတျော က ရုံးပိတျလို့ အိပျယာ နောကျကမြှ ထဖွဈတယျ ။ မိနျးမ လညျး မရှိတာ နဲ့ အေးဆေး နှပျနတော ။ ကိုးနာရီလောကျ ကမြှ အိပျယာ ထ မကျြနှာသဈပီး တခုခု စားမလို့ မီးဖိုခြောငျထဲ ဝငျလိုကျတော့ ဇငျဇငျကို တှလေို့ကျမယျတယျ ။ အလုပျမသှားဘူးလား မသိ ။ ခယျမလေး တော့ အရိပျအယောငျ မတှရေ့ ။
ဇငျဇငျ အလုပျမသှားဘူးလား သကျမှနျရော မသှားဘူး ကိုရဲ သကျမှနျက သှားတယျ ဇငျက ဒီနေ့ နားခငျြလို့ မနကေ့တညျးက ခှငျ့ တိုငျခဲ့တာ အျော… ကြှနျနျော ဇငျဇငျကို တဈခကျြကွညျ့လိုကျတယျ ။ သနပျခါး ပါးကှပျကွားလေးနှငျ့ ဆံပငျတှေ ကို နောကျလှနျ စညျးထားတယျ ။ အပျေါက တီရှပျ အကွပျလေးနှငျ့ အောကျက ထမိနျ အပွာရောငျ အပြော့သားလေး နှငျ့ ခဈြစရာ ကောငျးနတေယျ ။ ဇငျဇငျ အရမျးလှနပေါလား ကိုရဲ ကလညျး မွှောကျနပွေနျပီ ဘာစားခငျြလို့လဲ ဇငျဒီနေ့ အလုပျနားတာ စားခငျြတာရှိကြှေး ပါ့မယျ ခုလညျး ဘရိတျဖတျ ပွငျပေးထားပါတယျ စားလိုကျဦး တကယျ စားခငျြတာ ကြှေးမလို့လား ကြှေးမှာပေါ့ ကိုရဲ က ဘာ စားခငျြလို့လဲ ညူတူတူ မကျြလုံးရှဲ ဖွငျ့ကြှနျနေျာ့ ကိုကွညျ့ပွောတယျ ။
ဇငျဇငျ ကြှေးတာပဲ စားမှာပါ မွှောကျပွောတာ မဟုတျပါဘူး တကယျလှ လို့ လှတယျ ပွောတာပါ မကျြနှာကလညျး သနပျခါးလေး နဲ့ ခဈြစရာ ခန်ဒာကိုယျကလဲ စှဲဆောငျမှု ရှိတယျလေ မမမိုးလောကျ မလှပါဘူးနျော .. ဟုတျတယျမလား ဟုတျတယျ ကြှနျနေျာ့ မိနျးမ မိုးမိုးလှငျ လောကျတော့ မလှပါ ။ ကြှနျနေျာ့ မိနျးမ ကို မမမိုး လို့ ချေါကွတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ မိနျးမ က နန်ဒာလှိုငျ တို့လို ဘျောဒီ မြိုး မွနျမာဆနျဆနျ ဝတျထားလိုကျရငျ အပွငျထှကျရငျ လူတှတေျောတျောငေး ။ ကြှနျနျော လညျး အဲ့အလှ ကို စှဲ မကျလှနျးလို့ မိုးကို မရမက ခိုးပွေးပီး ယူထားတာလေ ။
လှပါတယျ မိုးက လညျး အလှ တမြိုးပေါ့ ဇငျဇငျက လညျး အလှတမြိုး စှဲ ဆောငျမှု တမြိုးပေါ့ နှဈယောကျလုံးလှပါတယျ ကဲ ဟုတျပါပီ ကိုရဲ ရယျ နှဈယောကျလုံး လှ တယျဆိုလို့ မမမိုး လိုပဲ ကိုရဲ စားခငျြတာ ကြှေးပါ့မယျ ရော့ လောလော ဆယျ ထမငျးကွျော နဲ့ ကွကျဥကွျော ထားတယျ ကျောဖီ လဲ ဖြျောထားပီးပီ စားလိုကျပါဦး ကြှနျနေျာ့ အတှကျထမငျးကွျော ပနျးကနျတှေ ပွငျပေးပီး သူနဲ့ သကျမှနျ အိပျတဲ့ အခနျးဘကျကို လှုပျလီလှုပျလဲ့ ဖွငျ့ ထှကျသှားတယျ ။ နောကျပိုငျး အလှ ကို ကွညျ့ဖွဈအောငျ ကွညျ့မိလိုကျသေး တယျ ။ ထမငျးကွျော စားရငျး ကြှနျနျော စဉျးစားနမေိတယျ ။ ဒီနေ့ အိမျမှာ ကြှနျနျော တဈယောကျတညျး ကနျြနမှော လဲ သိနတေယျ ဇငျဇငျ အလုပျ ဘာကွောငျ့မသှားတာလဲ ။
စကားတှကေ လဲ အထာတှေ ပေးနတေယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ဘကျက စလိုကျရငျ ပါလာ ဘို့ ကြိနျးသေ သလောကျရှိတယျ ။ တဈယောကျယောကျ သိသှားမှာလဲ စိုးရိမျတယျ ။ စမျးလညျးစမျးကွညျ့ခငျြတယျ ။ နောကျဆုံး ဘရိတျဖတျစားတာ လကျစသတျ လို ကျပီး ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျတယျ စမျးကွညျ့မယျပေါ့ ။ ထမငျးစားပှဲ က ထပီး ဇငျဇငျရှိရာ အခနျးဘကျသို့ လာခဲ့လိုကျတယျ ။ခနျး စညျးစလေး အသာ လှပျကွညျ့လိုကျတော့ အိပျယာပျေါ မှာ ပကျလကျလှနျပီး စာစောငျ ဖတျနတော တှလေို့ကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ကို မွငျတော့ ကိုရဲ ဘာလိုခငျြလို့လဲ ဇငျဘာလုပျပေးရမလဲ ရပါတယျ ဇငျဇငျ လညျး ပငျြးနမေလားလို့ စကားပွောရအောငျလို့ ကိုကွီး လဲ တဈယောကျတညျး ပငျြးနလေို့ ဝငျခဲ့မယျနျော ဟုတျလာလေ ကိုရဲ ကုတငျပျေါက တငျပွငျခှလေေး ထထိုငျတယျ ။ ကြှနျနျော လညျး သူ့ ကုတငျပျေါမှာပဲ တူတူ ထိုငျလိုကျပီး ရောကျတကျရာရာတှေ ပွောနလေိုကျတယျ ။ ရီစရာတှေ ပွောရငျ ဇငျဇငျက လိုကျရီ ပီး ကြှနျနေျာ့ ပေါငျ တို့ ပုံခုံး တို့ ကို လာလာ ပုတျတယျ ။ ကြှနျနျော လညျး စကားပွောရငျးသှေးတိုး စမျးခါ သူ့ ပုခုံးတို့ ပေါငျ တို့ ကို ထိ ကွညျ့တယျ ။ ဇငျဇငျ က မသိသလို နတေယျ ဘာမှ မပွောဘူး ။
ကြှနျနျော တို့လငျမယား မယူခငျက အကွောငျးတှပွေော သူတို့လငျမယား မယူခငျက အကွောငျးတှေ ပွောပေါ့ ။ အပွငျမှာ ခြိနျး တှေ့ ကွတာတှေ ရုပျရှငျကွညျ့တာတှေ ပနျးခွံ သှားတာတှေ ပွော ပေါ့။ ပွောနရေငျး နဲ့ ကြှနျနေျာ့ လကျကို သူ့ပေါကျပျေါ တငျထား ရငျး လကျကို ပွနျမရုတျပဲ ခပျကွာကွာနလေိုကျတယျ ။ တအိမျလုံးမှာ သူနဲ့ကြှနျနျော နှဈယောကျတညျး ဆိုတဲ့ အသိရယျ တကုတငျ တညျးမှာ တူတူ ထိုငျနတေယျ ဆိုတဲ့ အသိရယျက ရငျထဲမှာ ရငျခုနျနှုနျး မွနျလာစတောတော့ အမှနျပဲ ။ ကြှနျနေျာ့ လကျက သူ့ ပေါငျ ပျေါ မှာ ဖွဖွေေးခငျြးလေး ပှတျနမေိတယျ ။ ခနနတေော့ စကား ခန ပွတျသှားပီး ကြှနျနေျာ့ ကို စိုကျကွညျ့လာတယျ ။အကွညျ့ခငျြး တျောတျောကွာအောငျစုံနမေိတယျ သူ့ရငျထဲ ဘာလိုခငျြနတေယျ ကြှနျနျော ရငျထဲ ဘာလိုခငျြနတေယျ ဆိုတဲ့ ဆန်ဒတှကေို တဈ ယောကျနဲ့တဈယောကျ အသံတိတျပွောနမေိသလိုပဲ။ ခနတာ အခိုကျအတနျ့လေးမှာပဲ ဇငျဇငျ့ ကို ကြှနျနျော ဆှဲပှမေိ့လိုကျပီး နုတျ ခမျးတှေ နမျးပဈမိလိုကျတယျ ။ ထိုငျနရောကနေ ဇငျဇငျက ကုတငျပျေါမှာ ပကျလကျကလေး ဖွဈသှားပီး ကြှနျနျောက သူ့ အပျေါမှာ မိုးပီး နမျးနမေိတယျ။ ခန ကွာတော့ နုတျခမျးခငျြး ခှာမိလိုကျတယျ တဈယောကျကို တဈယောကျ ကွညျ့နရေငျး မမမိုး သိမှာ မ ကွောကျဘူးလား မသိအောငျနမှောပေါ့ မကွောကျပါဘူး ဒါဆို ဇငျလညျး မကွောကျတော့ဘူးနျောတဲ့ အိမျထောငျသညျတှပေီပီ အရာရာ ကို ရှကျရှံ့မှုမရှိ ။ တဈယောကျလိုအငျ တဈယောကျသိနပေီ ဖွဈတဲ့ အတှကျ ကာမနှံထဲ မှာ ပြျောဘို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ ။ နှဈယောကျလုံး အဝတျအစားတှေ ခြှတျလိုကျတယျ ။။
အိုးးး လှလိုကျတဲ့ နို့သီးလေး အစို့မခံ အကိုငျမခံရတာ ကွာလို့ထငျတယျ နို့သီးခေါငျးလေး က တငျးနတောပဲ ။ နို့ လေး တှကေို ကိုငျ ညှဈရငျး ဘယျပွနျညာပွနျစို့ပေးလိုကျတယျ . ဇငျဇငျ လကျတဘကျက ကြှနျနေျာ့ ခေါငျးကို ကိုငျထားရငျး လကျတဘကျက သူ အဖုတျနရောလေး အားပှတျနတေယျ ။ အဖုတျမှာ အမှေးတှကေ မထူ မပါး။ဇငျဇငျက အသားဖွူတော့ အမှေး မဲမဲလေးတှကေ ဆီးခုံပျေါမှာ ထငျးနတေယျ ။ နို့တှေ စို့ နရောက နေ တဖွေးဖွေး အောကျလြောဆငျးလာပီး ဆီးခုံးပျေါမှာ စောကျမှေးလေးတှေ ကို လြှာ နဲ့ တခကျြသပျလိုကျတယျ ဇငျဇငျ တဈယောကျ ခေါငျး ထောငျကွညျ့ပီးကိုရဲ မှုတျပေးမလို့လား အငျး မကွိုကျဘူးလား ဇငျ က ကွိုကျတာပေါ့ ပီးမှ ကိုရဲ ကိုလညျး ပွနျမှုတျပေးမယျ ပောပွောဆိုဆို ပေါငျကို ပိုကားလိုကျပီး တငျပါအောကျ ကို ခေါငျးအုံး ခု လိုကျတယျ ။ အဖုတျက ပွူထှကျလာတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ခေါငျးကို လကျနှဈဘကျနဲ့ ကိုငျပီး သူ့ စောကျဖုတျပျေါ ဖိကပျလိုကျတယျ ။ အသကျရှုတောငျ နဲနဲ ကွပျသှားတယျ အဖုတျမှာ စောကျရညျတှေ က ရှဲနပေီ ။ အဖုတျကွီး ကို ကော့ကော့ပေးရငျ ကြှနျနျောယကျပေး တာ ကို ခံနတေယျ ။ ပါးစပျက လညျး တအငျးအငျး နဲ့ ညီးနပေီ။ အငျးးး အားးး ကိုရဲ အားးး ကောငျးတယျကှာ အားး မှုတျပါ ယကျပါ နျော အားးး ပလတျ ပလတျ ပွှတျ ပွှတျ အဖုတျ တပွငျလုံး ယကျလိုကျ စောကျပတျနုတျခမျးသားတှေ ဖွဲပီး အတှငျးကို လြှာ နဲ့ ထိုး ပေးလိုကျ စောကျစိ ကို သာသာလေး ကိုကျလိုကျ ဖွဈ ယကျပေးနမေိတယျ ။ ဆယျမိနဈ လောကျ ယကျပေးပီး ကြှနျတျော ထထိုငျ လိုကျတယျ ပါးစပျမှာ ပနေတေဲ့ သူ့ စောကျရညျနဲ့ တံတှေး တှေ ကို ဘေးနားက ခုနက ခြှတျထားတဲ့ သူ့ ထမိနျ အပွာရောငျလေး ကို ဆှဲယူပီး သုတျလိုကျတယျ ။
ဇငျ့ စောကျပတျက သိပျမပွဲသေးဘူးနျော မှုတျလို့ကောငျးတယျ ပွဲမလား ကိုရဲ ကလဲ မလုပျဖွဈတာ ပဲကွာနပေီ ကို ဇငျ့ ယောကျြား ကော အခု လို မှုတျပေးလား အငျး မှုတျပေးပါတယျ လာ ..အခု ဇငျ့ အလှညျ့ ကိုယျလဲ အရမျးခံခငျြနပေီ ဇငျ့ နုတျခမျး လှလှ လေး နဲ့ လှပေေးတော့ ခကျြခငျြးပဲ ပကျလကျလှနျနရောက နေ ထ လာပီး ကြှနျနေျာ့ လီး ကို ကိုငျတယျ ။ ကြှနျနျော လညျး ပကျလကျလှနျပေးလိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လီး ကို လကျနဲ့ တဈခကျြနှဈခကျြ ဂှငျးထုပေးပီး လီးပျေါ ကို တံတှေး ပဈြကနဲ ထှေးလိုကျ တယျ ။ သူ့လကျထဲမှာ ကြှနျနေျာ့ လီး က သူ့တံတှေး နဲ့ ခြောမှတျလာတာ ကို ဂှငျးထု ပေးနရေငျး ကြှနျနေျာ့ ကို တခကျြကွညျ့တယျ ။ ပီးတော့ အောကျကို ငုံလိုကျပီး လှတေော့တာပဲ ။ ယောကငြ်္ား နဲ့ ဘယျလောကျတောငျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး နခေဲ့တယျ မသိ ။ အမှုတျ အရမျးကောငျးတယျ ။ လီးဒဈကို လြှာ နဲ့ ရဈပတျလိုကျ ဥတှကေို ပှတျလိုကျ လီးထိပျကို နုတျခမျးနဲ့ ပှတျလိုကျ တဈခြောငျး လုံး ငုံ စုပျလိုကျဖွငျ့ သူ့ရဲ့ ကြှမျးကငျြမှုအောကျမှာ ကြှနျနျော လူးလိမျ့နတောပဲ။
အားးး ကောငျးလိုကျတာ ဇငျရယျ ကြှမျးကငျြလိုကျတာ ကိုယျ့မိနျးမ ထကျတောငျ ကောငျးနတေယျ ` ဇငျဇငျ့ ခေါငျး ကို ကိုငျပီး လီး ကို အထုတျအသှငျး လုပျပေးနလေိုကျတယျ ပွှတျပွှတျပွှတျအု…အု…အု လီးအရငျးမှ ထိပျဖြားထိ လြှာ အပွားလိုကျ ယကျလိုကျ ဥ တှကေို ငုံစုပျလိုကျဖွငျ့ အားရပါးရ ကြှမျးကငျြစှာ စုပျပေးယကျပေးနတေော့တယျ ။ အစက အဲ့လောကျတောငျ ကြှမျးကငျြမယျ မ ထငျခဲ့ ။ မွနျမာဝတျစုံလေး ဖွငျ့ သာ နတေတျသူတဈယောကျမို့ ဒီဘကျပိုငျး မှာ အဲ့လောကျတောငျ ထနျမယျ မထငျခဲ့ ။ အခု လို အိမျထောငျသညျ တှေ ပီပီ လှတျလှတျလပျလပျ ခံစားခြိနျမှာတော့ ဇငျဇငျ့ရဲ့ အစှမျးအစ က ကြှနျနျော တောငျလကျဖြား ခါလောကျ အောငျ ကောငျးလှနျးလှနတေယျ ။ ဆယျငါးမိနဈလောကျ ကွာအောငျ စုပျပေးပီး ကြှနျတျော တောငျ ပီးခငျြခငျြ ဖွဈသှားတယျ.. ဇငျ ဇငျ ကိုယျ လိုးခငျြပီကှာ ဆကျမှုတျနရေငျ ပီးသှားလိမျ့မယျအငျးးး အသငျ့ပါပဲ ကိုရဲ..ဇငျ ဘယျလိုနပေေးရမလဲဘေးတစောငျးလှဲ အိပျ လိုကျနျော အငျးး ဇငျဇငျက ဘေးတဈစောငျးလှဲ အိပျရငျး တငျပါးကွီး ကို ကြှနျနေျာ့ ဘကျ ကော့ပေးလိုကျတယျ။ ဇငျဇငျ့ ပေါငျတဈ ခြောငျး ကို အသာလေး မ ရငျး ကြှနျနေျာ့ လီးတံ ကို အဖုတျဝ မှာ တလေို့ကျပီး နှဈခကျြသုံးခကျြလောကျပှတျဆှဲ ပေးလိုကျတယျ ။
ကြှနျနေျာ့ လကျတဈဘကျက ဇငျဇငျ ကိုယျလုံးအောကျက နလြှေိုဝငျပီး နို့သီး ကို ဖဈြညှဈပေးနလေိုကျတယျ ။ ကိုရဲ ..လိုးတော့ကှာ ..ဇငျ မနနေိုငျတော့ဘူး ထညျ့လိုကျတော့နျော အငျးးး ဒါဆို ထညျ့ပီနျောပလှတျ…အ..အ ပလှတျ ကနဲ မွညျသံ နှငျ့ အတူ ဇငျဇငျ့ စောကျဖုတျ ထဲကြှနျတော့ လီး တံ ဒဈဖြား မွုပျ ဝငျသှားတယျ ။ ဖွေးဖွေး ခငျြး သှငျးလိုကျထုတျလိုကျ လုပျပေးနပေမေယျ ဘေး တစောငျး လိုးနတော မို့ လီး တဈခြောငျးလုံး အဆုံးထိတော့ မဝငျဘူး ။ တဈဝကျကြျောကြျောလောကျသာ ဝငျထှကျ လိုကျဖွငျ့ စညျး ခကျြညီညီ လှုပျရှားနမေိတယျ။ ဇငျဇငျ တအီးအီး တအားးအားး ဖွငျ့ ညီးညူရငျး တငျပါးကွီးတှေ ကို လညျး နောကျဘကျကို ပွနျပွနျ စောငျ့ပေးနတေယျ ။ ဘှတျ..ဘှတျ..ဘှတျဖတျ ဖတျဖတျ…အားးးအ..အ. အ. ကောငျးတယျ ကိုရဲ ခပျပွငျးပွငျးလေး ..အားးး “`အ ငျးးးအငျးးးအားးး အု..ရော့ အားးး ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ..ဖတျ ဖတျ ဖတျ အားးး ..အားးး ဇငျ.. ဖငျကုနျးလိုကျကှာ ဖငျကုနျးပီး တကျခြ ခငျြတယျ အငျး ကိုရဲ သဘော ကုနျးလိုကျမယျနျော ဇငျဇငျ က ဖငျကို ကုနျးပေးလိုကျတယျ ။ဇငျဇငျ့ နောကျမှာ ဒူးထောကျပီး အဖုတျဝ မှာ တပေီ့း တငျပါး နှဈခွမျး ကို ကိုငျကာ လီး စောငျ့ထိုးသှငျးလိုကျတယျ
အားးးးထိတယျ အ အားးး အားး ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖုတျ ဖူတျ ဖုတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ အားး ကိုရဲ ကောငျးလိုကျတာ လိုးပါ အားးး ဇငျ့ကို လိုးပါ ဇငျဇငျ့ တငျပါး နဲ့ ကြှနျနေျာ့ စညျးခုံ တို့ တဖတျ ဖတျ မွညျအောငျ ရိုကျသံ တှေ ဆူညံအောငျ ထှကျနေ တယျ။ ဖွောငျးးး အားးးးးးးးးးး နောကျကို ကားတငျးထှကျနတေဲ့ တငျပါးကွီး ကို ကြှနျနျော မခငျြ့မရဲ တဈခကျြလကျဝါးနဲ့ ခပျပွငျး ပွငျး ရိုကျလိုကျတယျ အားးး ကောငျးတယျ ကိုရဲ အားးးး ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ အားးး ကောငျးလိုကျတာ ကိုရဲ မညှာ နဲ့ တော့ ဇငျ့ကို လိုးပါ လကျတဘကျ ဖွငျ့ ဇငျဇငျက ကြှနျတော့ ဥ တှကေို ပေါငျကွားမှ လှမျးကိုငျ ပှတျပေးနတေယျ။ ဖနျြးးးဖနျြးဖြ နျးးးး ဇငျဇငျ တငျပါး ကို သုံးလေး ခကျြ ဆကျတိုကျ ရိုကျပဈလိုကျတယျ လီးက လညျး အစောငျ့မပကျြ .. ဇငျဇငျ တဈယောကျ အရမျးကောငျးနပေီး သူ့တငျပါး မှာ ကြှနျနေျာ့ လကျငါးခြောငျးရာ အစငျးသားပျေါလာတယျ ။ အသားဖွူတော့ တငျပါးက ရဲစပျလာ တယျ။
အခကျြလေး ငါးဆယျလောကျ ဆကျတိုကျလိုးပဈလိုကျပီး ကြှနျနေျာ့ လီးထိပျက ကဉျြတကျလာတယျ နောကျဆုံး ဇငျဇငျ့ စောကျဖုတျ ထဲကို တဆုံး ထိုးသှငျး ပဈလိုကျပီး လီးရတှေကေို စောကျဖုတျထဲ ကို ပနျးညှဈထုတျပေးလိုကျတယျ .. `အားးးးးးး ပီးပီ…ဇငျ အားးးးးးးးထှကျကုနျပီ အားးးး ညှဈထညျ့ပေး အားးးးဇငျလညျးပီးပီ အားးးးးးကောငျးတယျ ကိုရဲအားးးးးး ဇငျဇငျ လေးဘကျကုနျး နရောကနေ အားပြော့ပီး ကုတငျပျေါ မှောကျလြှကျကြ သှားတယျ ကြှနျနျော လညျး အလိုကျသငျ့ ဇငျဇငျ့ ကိုယျပျေါ မှောကျခလြိုကျ ရငျ လကျကနျြ သုတျရေ အနညျးငယျ ကို ထှကျသလောကျ ပနျးထုတျပေးလိုကျတော့တယျ။ ဇငျ ´´ ဟငျ ပွောလေ ´´ ကိုယျ့မိနျးမ ပွနျမလာခငျအထိ အခုလို နခေငျြတယျကှာ ´´ အငျး ပါ ကိုရဲကလဲ ကိုရဲ စိတျကွိုကျပါ ´´ ဒါပမေယျ့ သကျမှနျ ရှိနသေေးတော့ ဘယျလိုလုပျရမလဲ ´´ အငျးးး ´´ ဇငျဇငျ ခပျတှတှေေ လေး စဉျးစားနရေငျး ကိုရဲ ´´ အငျး ပွောလေ ´´ ကိုရဲ သကျမှနျကို စညျးရုံးကွညျ့ပါလား ´´ ဟငျ ဘယျလို စညျးရုံးရမှာလဲ ´´ ဒီလိုလေ အခု ဇငျ နဲ့ ကိုရဲ မှားပီးကွပီ အဲ့ဒီတော့ သကျမှနျသိသှားရငျ မမ မိုး ကို ပွနျတိုငျနိုငျတယျ အဲ့ဒီတော့ သူ ပွနျမတိုငျနဲ့ အောငျ သကျမှနျ ကို လညျး စညျးရုံးမယျလေ ´´ အငျးလေ … ဘယျလို စညျးရုံးရ မှာလဲ သကျမှနျကို ဖှငျ့ပွောပီး ပွနျမတိုငျအောငျ ပွောရမှာလား မလှယျဘူးထငျတယျ အကုနျ ပွဿနာတှေ ရှုပျကုနျလိမျ့မယျ ´´
အာ ကိုရဲ ကလညျး ဝေးပါ့ .. ဇငျနဲ့ ကိုရဲ မှားကွသလို သကျမှနျကိုလညျး အမှားထဲ တိုးဝငျခိုငျးလိုကျမှာပေါ့ ´´ ဟငျ ဘယျလို ဘယျလို ´´ ကဲ ဒီလောကျတောငျ ပွောရတာဝေးတယျ ကိုရဲ ကလဲ ညနေ သကျမှနျ ပွနျလာရငျ ဇငျ အပွငျထှကျရှောငျပေးမယျ ကို ရဲ ဘာသာ ဘယျလို စညျးရုံးစညျးရုံး သိပီလား ´´ ဟာ ဒါဆို ကိုရဲ …က သကျမှနျကို လဲ အခုလို ဇငျဇငျ နဲ့ နသေလို … အဲ့လိုလား ´´ ဘာလဲ မကွိုကျဘူးလား ´´ ဟဲဟဲ ကွိုကျတာပေါ့ ဒါပမေယျ့ ဖွဈပါ့မလား အဆငျပွပေါ့မလား ´´ ဒါတော့ ကိုရဲ အစှမျးအစပေါ့ ´´ ဇငျဇငျ က မကျြစောငျးလေး တဈခကျြ ပဈလိုကျသေးတယျ ။ ကဲ ဒါဆိုလညျး စိတျခြ ဇငျ့ အကွံ အတိုငျး အောငျမွငျစရေမယျ လောလောဆယျတော့ နောကျတဈခြီလောကျ စှဲ ရငျကောငျးမလား ´´ တျောပီ ကိုရဲ ညနေ သကျမှနျ အတှကျ အားမှေးထားလိုကျ တော့ ဇငျလညျး နာနပေီ ခန နားဦးမယျ ´´ … … ညနေ လေးနာရီလောကျ သကျမှနျပွနျလာတော့ ဇငျဇငျ က အပွငျသှားဦးမယျ ဆိုပီး ထှကျသှားတယျ ။ ကြှနျနျော နဲ့ သကျမှနျ နှဈယောကျတညျး အိမျမှာ ကနျြခဲ့ပီ ။ ဘယျလို စရမလဲ စဉျးစား ဆဲ ။ အတငျး ဝငျကွမျး လို့ လညျး မဖွဈ ။ ခယျမလေး သကျမှနျ ရခြေိုးပီး အခနျးထဲမှာ အဝတျအစား လဲ နပေုံ ရတယျ ။
ကြှနျနျော ဧညျ့ခနျးထဲ မှာ ထိုငျနေ ရငျး စဉျးစားဆဲ ဘယျလို စညျးရုံးရရငျ ကောငျးမလဲ အဖွကေ မထှကျ ၊ ဒါပမေယျ့ ကံကွမ်မာက ကြှနျနေျာ့ ဘကျ အရေးပေးလာတယျ အခနျးထဲမှာ သကျမှနျထှကျလာပီး ကြှနျနေျာ့ ဘေးနားမှာ ဝငျထိုငျကာ ကိုကွီး ´ ဟငျ ဘာလဲ သကျမှနျ ´´ ရော့ ဒါကိုကွီး စှပျကယျြ မ လား ´´ အငျးးး ဟုတျတယျ သကျမှနျ ဘာလို့လဲ ´ မခြိုမခဉျြ မကျြနှာပေး ဖွငျ့ သကျမှနျက ဘာရယျ မဟုတျပါဘူး သကျမှနျနဲ့ မမဇငျ အိပျတဲ့ ကုတငျပျေါမှာ တှလေို့ ကိုကွီး မြား မကေ့နျြခဲ့တာလားလို့ ´´ အျော …အငျးးး ဟိုလေ ..ဟို …´´ ကြှနျနျော အထဈထဈ အငေါ့ငေါ့ ဖွငျ့ ဘာပွောရမှနျးမသိ ဘာတှေ တဟိုဟို ဖွဈနတောလဲ ကိုကွီး မှနျမှနျပွော ဒီနေ့ တနလေုံ့း မမဇငျ နဲ့ ကိုကွီး ၂ ယောကျ တညျး ကနျြခဲ့တာ အမှနျအတိုငျးပွော မညာနဲ့´´ အငျးးး သကျမှနျ …ကိုကွီး မညာခငျြဘူး အဲ့တော့ ဘယျလို ပွောရမလဲ ဆိုတော့ ကို ကွီး နဲ့ဇငျဇငျ ….´´ ခရီးဆုံး ရောကျသှားတယျ ဆိုပါတော့ ´´ အငျး ဟုတျ ..ဟုတျတယျ သကျမှနျ ´´ လုပျတုနျးက လုပျပီး ဘာ ကွောကျနတောလဲ ကိုကွီး ဟှမျး ´´ ဟိုလေ ..ဟို …´´ ကဲ ကိုကွီး ..တဟိုဟို ဖွဈမနနေဲ့ မမဇငျက ခုန က အပွငျမထှကျခငျ မှာ သှားတယျ နလေ့ညျက မမဇငျ နဲ့ ကိုကွီး တူတူ အိပျပီး ကနျြခဲ့တဲ့ စှပျကယျြလေး ပေးလိုကျပါတဲ့ အပွငျခန သှားပီး ပွနျလာခဲ့မယျတဲ့ သူ့သူငယျခငျြးအိမျ ခန သှားပီး ပွနျလာလိမျ့မယျ အပွနျဆေးလညျး ဝငျဝယျခဲ့မယျတဲ့ ´´
ဘာဆေးလဲ ´´ အျော ကိုကွီးကလဲ တား ဆေးပေါ့လို့ တျောကွာ မမဇငျ နဲ့သကျမှနျ ဘိုကျကွီး ကုနျရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ ´´ ဟငျ ..မမဇငျ နဲ့ သကျမှနျ ဟုတျလား ´´ ဘာလဲ မမဇငျ တဈယောကျတညျးကိုပဲ အခဈြတှပေေးမှာလား သကျမှနျကိုကတြော့ မပေးတော့ဘူးလား ´´ ဟငျ ..သကျမှနျက ကိုကွီး နဲ့ ဇငျဇငျ ဖွဈတာ ကို သိပီးပီပေါ့ ဟုတျလား ´´ ဒါပေါ့ … ခုနက မမဇငျ အကုနျပွောသှားပီးပီ ..အခု သကျမှနျနဲ့ကိုကွီး ကို ဘာလို့ ၂ ယောကျထဲ ထားခဲ့တာ ဆိုတာ ကော သကျမှနျပွောပွရဦးမှာလား ´´ ပွောစရာ မလိုတော့ပါဘူး သကျမှနျရယျ …´´ ကြှနျနျော သကျ မှနျ ခါးလေး ကိုအသာ လှမျးဖကျလိုကျတယျ ။ ပိနျသှယျသှယျ ကိုယျလုံးလေး အလိုကျသငျ့ ပါလာတယျ ထို့နောကျ နုတျခမျးလေး ကို အသာ ငုံစုပျလိုကျတော့တယျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ သကျမှနျ ရဲ့ အနမျးတှကေ ဇငျဇငျ ထကျတောငျ သာသေးတယျ ။ ကြှမျးကငျြလှ တယျ ။ ပါးစပျထဲမှာ လြှာခငျြး လိမျလိုကျ စုပျလိုကျ လုပျပေးနတော တကယျ့ ဆရာမကွီး အလား ၊။ သကျမှနျ ရဲ့ နို့ အုံ ကို အကြီ ပျေါ ကနေ ကိုငျလိုကျတယျ ။ သေးလှနျးလှတယျ ။ ဟိတျ .. ကိုကွီး ဧညျ့ခနျးကွီးမှာနျော လူတှေ မွငျကုနျမယျ ´´ အငျး လာ အိပျခနျးထဲ ကို ကိုကွီး ပှခြေီ့သှားမယျ ´´ ကိုယျလုံးသေးသေး လေး အား အသာ မ ကာ အခနျးထဲ ကို ချေါဆောငျ ခဲ့လိုကျတော့တယျ ။ …. …
အခနျးထဲ ရောကျတာ နဲ့ ကုတငျပျေါမှာ သကျမှနျကို ဖငျကုနျးခိုငျးလိုကျတယျ ။ ဖငျကုနျးထားတဲ့ သကျမှနျ့ ဂါဝနျ ကို အပျေါထိ ဆှဲ လှနျလိုကျတော့ အောကျမှာ ပငျတီ အဝါနုရောငျလေး အလယျမှာ နဲနဲ တောငျ စိုနပေီ ။ ပငျတီပျေါကနေ အသာဆှဲပှတျလိုကျတော့ သကျမှနျ ခါးလေး တှနျ့သှားပီး ညညျးညူသံလေး ပေးလာတယျ အားးးရှီးးးး ´´ သကျမှနျ ခံခငျြနပေီလား ´´ အငျး ကိုရဲ လုပျပေးတော့ ´´ ပငျတီ ကို မခြှတျတော့ ပဲ ဘေးသို့ အသာဆှဲဖယျလိုကျတယျ ။ တငျပါးက သေးသေး မို့ အဖုတျလညျး သေးမယျထငျထားတာ အဖုတျက တျောတျော ပွဲပွဲ ရီးစား နဲ့ ဘယျလောကျတောငျ လိုးထားလဲမသိ ။ ကြှနျနျော လညျး အဖုတျ ဝမှာ လီးတံ ကို သှငျးပီး ဒဈ ကို ထိုးမွုပျလိုကျတယျ ။ ဘယျအခြိနျထဲက ခံခငျြနသေညျမသိ စောကျရညျတှေ ရှဲနတောမို့ လီးက အဖုတျထဲပလှတျ´´ ကနဲ အသံမွညျကာ ဝငျသှားတော့တယျ အားးး ကိုရဲ ဝငျသှားပီ အားးး ကောငျးလိုကျတာ ´´ သကျမှနျကို ကိုယျလိုးနပေီ သကျမှနျ ´´ အငျးးး လိုးလိုး ´´ အားးး ငါ့ခယျမလေး ကို လိုးနပေီကှာ ´´ ဟုတျတယျ ကိုရဲ လိုးး သကျမှနျကို ကိုရဲ လိုးနပေီ ´´ နောကျကနေ အားရပါးရ စောငျ့လိုး ပဈလိုကျတယျ ။ အခနျးထဲမှာ လိုးသံတှေ ဆူညံထှကျလာတယျ ။ သကျမှနျကလညျး တအားအား ဖွငျ့အျောနေ တော့တယျ ။ လိုးနရေငျး နဲ့ ပငျတီ စ ကို လကျတဘကျက ကိုငျထားတာ မို့ အားမရတာ နဲ့ ကြှနျနျောလကျနှဈဘကျနဲ့ ပငျတီကို ဆှဲ ဖွဲ ပဈလိုကျတယျ ဗြိ..ဗြိ ´´
ပငျတီဘောငျးဘီ အကုနျပွဲထှကျသှားတာ နဲ့ အောကျကို ဆှဲခလြိုကျပီး ခါးကို ကိုငျကာ ဆကျစောငျ့ပဈလိုကျတယျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ အားး အားး အားး ဟူတျတယျကိုရဲ ထိတယျ အငျးးးစောငျ့လိုးပေး အားးး´´ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ´´ နောကျကနေ စောငျ့နရေ တာ ညောငျးလာပီမို့ သကျမှနျ ထ ကိုယျ့ ပျေါ တကျခှပီး အပျေါ က စောငျ့ပေး ´´ အငျးးး ကိုရဲ ´´ သကျမှနျက ကုနျးနရောမှ ထကာ ကြှနျနျောက ပကျလကျလှနျလိုကျပီး အပျေါ မှ တကျစောငျ့တော့တယျ ။ တကျစောငျ့နရေငျး နဲ့ ဂါဝနျကို ခေါငျးမှ ဆှဲ ခြှတျပဈလိုကျ တယျ အားး ခံလို့ ကောငျးတယျ ကိုရဲ ရယျ သကျမှနျ ကိုရဲ နဲ့ ခံခငျြနတော ကွာပီ မမ နဲ့ ကိုရဲ လိုးနသေံတှေ ကွားတိုငျး စောကျဖုတျထဲ က တအား ယားတာပဲ ´´ အငျးးး သကျမှနျ အားရပါးရစောငျ့ အားးး ကောငျးတယျ ´´ အငျးးး သကျမှနျ နဲ့ မမဇငျ ကိုရဲ တို့ လငျမ ယားလိုးနသေံ တှကွေားတိုငျး အလိုးခံခငျြလှနျးလို့ တဈယောကျအဖုတျ တဈယောကျပှတျနကွေတာ ကွာပီ အခုမှ တကယျ ခံပေးရ တော့တယျ အားး ´´ သကျမှနျက အပျေါမှ စောငျ့နရေငျး စကားတှေ လညျး တတှတျတှတျပွောနသေေးတယျ ။ ဒီလိုမှနျး သိ အရငျ ကတညျးက ခယျမလေး ကို လိုးပါတယျဗြာ ။
ကြှနျနျော အောကျကနေ ပကျလကျလှနျပေးထားရာမှ သကျမှနျနို့တှကေို ပါ လှမျးကိုငျပီး နယျပေးနမေိတယျ ။ သကျမှနျ နို့က ဇငျဇငျ နို့တှလေောကျတော့ ကိုငျလို့ မကောငျး ။ သေးနတေယျ။ နို့ကို ကိုငျနတေဲ့ ကြှနျနေျာ့ လကျတှေ ကို သကျမှနျ က လှမျးယူက ပါးစပျထဲ ထညျ့ကာ တပွှတျပွှတျ စုပျလိုကျသေးတယျ။ အားး သကျမှနျရယျ ကောငျးလိုကျတာ စောငျ့ပေး အားးးရှီးးး´´ အားးး ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ သကျမှနျ ခန အောကျဆငျးဦး လီးစုပျပေးဦးကှာ ´´ အငျးး ကိုရဲ …´´ သကျမှနျက အပျေါက နေ စောငျ့ပေးနရောမှာ ဘေး မှာ ခပျကုနျးကုနျးလေး ဆငျးလိုကျကာ လီးတံကို စစုပျတော့တယျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ အားးး သကျမှနျက လူသာသေးတယျ အမှုတျအစုပျ အရမျးကြှမျးကငျြတယျ အားးး သကျမှနျ ကောငျးလိုကျတာ သကျမှနျ စုပျပေးတာ အရမျးကောငျးတယျကှာ´´ လီးပျေါ တံတှေး ထှေးခလြိုကျ ပွနျစုပျလိုကျ ဖွငျ့ သကျမှနျရဲ့ စုပျခကျြတှကေ မွနျဆနျလှနျးတယျ အားးးအားး သကျမှနျ အားးးကောငျး တယျ ´´ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ ပကျလကျလှနျရငျးမှာ ခေါငျးကို အသာထောငျကာ သကျမှနျစကျပတျ ကို လှမျးကွညျ့လိုကျတယျ ။ အဖုတျမှာ အရညျတှေ စိုရှဲ နပေီး ပွဲအာအာ လေး ဖွဈနတေယျ။ ကြှနျနျော ကသာ အခုမှ သကျမှနျကို လိုးရတာ ဘယျသူတှေ က ဘယျလောကျတောငျ လိုးထားပီးပွီ လဲမသိ ။
ကိုယျ့ခယျမလေးမို့ လိုးခငျြနပေမေယျ့ သိက်ခာ ထိနျးနရေတာ အခုတော့ သကျမှနျက ကိုယျ့ထကျပငျ ပိုတဲ့ ဆန်ဒတှေ နဲ့ လုပျပေးနေ တယျ။ သကျမှနျ စကျပတျ ထဲကို လကျညိုးနဲ့လကျခလယျ နှဈခြောငျးပူးပီး ထိုးထညျ့ပေးလိုကျတယျ အားး ´´ ပွှတျပွှတျ ပွှတျ ´´ ဇှတျ ဇှတျ ဇှပျ ..ဇှပျ ´´ ကြှနျနေျာ့ စိတျတှေ ထိနျးထားလို့ မရနိုငျတော့ နလေ့ညျ က လညျး ဇငျဇငျ နဲ့ အပီ လိုးထားတာမို့ အကွာကွီး မထိနျးနိုငျတော့ပဲ စုပျပေးနတေဲ့ သကျမှနျပါးစပျထဲ ကို လီးရတှေေ ပနျးထညျ့ပဈလိုကျတယျ အားးး အားးးထှကျပီ ညီမလေး အားး သကျမှနျ အားးး´´ လရေ တှေ ပနျးထှကျလာပမေယျ သကျမှနျက ပါးစပျထဲမှ လီး ကို မခြှတျပဈပဲ ဆကျတိုကျ ဆကျစုပျပေးကာ ကြှနျနေျာ့ လီးရတှေကေို ပါ ယကျပဈလိုကျတော့တယျ ။ အားးးကောငျးလိုကျတာ ကိုရဲ´´ အငျးးး ကောငျးတယျ သကျမှနျစုပျပေး တာ အရမျး ကောငျးလှနျးလို့ ထှကျကုနျတယျ ´´ အငျး ကိုရဲ ခနနားလိုကျဦးနျော သကျမှနျရသှေားဆေးလိုကျဦးမယျ ´´ ဆိုပီး ကု တငျပျေါမှ ဆငျးသှားတယျ ။ သကျမှနျ နဲ့ ဇငျဇငျ အိပျတဲ့ ကုတငျပျေါမှာပဲ ကြှနျနျော မှိနျးနရေငျး အိပျပြျောသှားတော့တယျ အိပျယာက နိုးတော့ အပွငျဘကျမှာ မှောငျနပေီ။ လကျက နာရီကို ကွညျ့လိုကျတော့ ည ၈ နာရီတောငျထိုးနပေီ ။
ဧညျ့ခနျးဘကျက စကားသံ သဲ့သဲ့ ကွားနရေသညျမို့ ဇငျဇငျ ပွနျရောကျနပေီဆိုတာ သိလိုကျတယျ ။ အိပျယာထဲက ထကာ အပွငျ မထှကျသေးပဲ ရခြေိုးခနျးဝငျ ကာ ရခြေိုးလိုကျတော့ လူက လနျးဆနျးသှားတယျ ။ တရေးတမော အိပျထားသညျမို့ အားတှလေညျး ရှိနသေလို ဖွဈကာ ရခြေိုးရငျး ငပဲက ထောငျမတျနတေော့တယျ ။ ဆပျပွာဖွငျ့ အသာအယာ ပှတျသပျတိုကျဆေးကာ ရတေဝွကီး ခြိုးပီး အဝတျအစားလဲကာ ဧညျ့ခနျးဘကျထှကျလာလိုကျတယျ။ ကိုကွီး နိုးပီလား ဧညျ့ခနျးထဲမှာ ခွသေညျးထိုငျဆိုးနသေော ခယျမလေး သကျမှနျက လှမျး မေးတယျ ။ ညာဘကျကို ကွညျ့လိုကျတော့ ထမငျးစားခနျးမှာ ဇငျဇငျက အစားအသောကျတှပွေငျဆငျနတေယျ ကိုကွီး အားရှိသှား အောငျလို့ တမငျ မနှိုးပဲ ထားထားတာ အငျးး…အားကတော့ တအားရှိနပေီ သကျမှနျရေ .. ရခြေိုးလိုကျတော့ ပိုလနျးသှားတယျ ကဲ ပို အားရှိသှားအောငျ ညစာအသငျ့ပွငျထားပီ ယောကငြ်္ားရေ.. ဇငျဇငျက အရှနျးအဖောကျစကားလေး ဖွငျ့ ထမငျးစားခနျးကနေ လှမျးပွောတော့ သကျမှနျက ဟငျးးးး မမဇငျနျော သူ့ယောကငြ်္ားလဲ မဟုတျပဲနဲ့ တို့ကိုကွီးကိုမြား ပိုငျစိုးပိုငျနငျး ဟိဟိ .. မနကျက ငါ့ ယောကငြ်္ားဖွဈသှားပီလေ ဟှမျး ..မမဇငျ တဈယောကျတညျး ဆိုငျတာမဟုတျဘူးနျော သကျမှနျလညျး ဆိုငျပါတယျနျော အမ လေ..သူတို့နှဈယောကျက ဝစေုခှဲနကွေသေးတယျ ။
ခွသေညျးဆိုးတာလကျစသတျရငျး သကျမှနျက ကြှနျနေျာ့ လကျမောငျးလေး ကို လာဆှဲကာ ထမငျးစားခနျးထဲ အတူတူဝငျလာလိုကျသညျ ။ ကြှနျနျော လညျး အလိုကျတသငျ့ သကျမှနျ ခါးလေးကို ဖကျထားလိုကျ တယျ ။ သုံးယောကျသား ပြျောပြျောရှငျရှငျ ဖွငျ့ ညစာ စားလိုကျကွတယျ ကြှနျနေျာ့ အတှကျ အဘေီစီ ပုလငျး တဈလုံး နဲ့ သူတို့က စ ပိုငျ တဈယောကျတဈလုံးစီသောကျလိုကျကွသေးတယျ ။ သကျမှနျက ကိုကွီး ..ဒီည ဘယျမိနျးမ နဲ့ အိပျမှာလဲ ပွောနှဈယောကျလုံး နဲ့ အတူတူ အိပျမှာပေါ့ ဆိုတော့ သုံးယောကျသား သဘောကရြငျး ရယျမိလိုကျတယျ အားလုံး စားသောကျပီးသှားတော့ ဇငျဇငျက ရော့ ကိုကွီး သောကျလိုကျဦး ဆိုပီး တော့ပျရိုး နှဈလုံးပေးတယျ ဟ… နှဈလုံးကွီးတောငျပါလား အငျးလေ .. နှဈယောကျလုံးနဲ့ အိပျ မှာဆိုတော့ နှဈလုံးသောကျရမှာပေါ့ ရော့ သကျမှနျ ဒါက နငျနဲ့ငါ တဈယောကျတဈလုံး ဆိုပီး ဆေးလုံးသေးသေး လေး တဈလုံးစီ သောကျလိုကျကွတယျ ။ တားဆေးပဲ ဖွဈလိမျ့မညျဆိုတာ မမေးပဲ သိလိုကျတယျ ။ သိပျမကွာခငျမှာ ပဲ ကြှနျနျော တို့ သုံး ယောကျလုံး အိပျခနျးတှငျးကို ရောကျလို့ လာတော့တယျ ။ ဒီတဈခါတော့ နလေ့ညျက အိပျခဲ့တဲ့ သူတို့ အိပျခနျးထဲကို မဟုတျတော့ပဲ ကြှနျနျော နဲ့ ကြှနျနေျာ့ မိနျးမ အကွိမျကွိမျ အိပျစကျခဲ့တဲ့ ကြှနျနေျာ့ တို့ လငျမယား အိပျယာကွီး ထကျကိုပေါ့ ။
အိမျခနျးထဲ ရောကျ တယျ ဆိုရငျပဲ ဇငျဇငျ နဲ့ သကျမှနျက အဝတျတှေ အကုနျခြှတျပဈလိုကျကွတော့တယျ ။ အဝတျတှေ တဈခုခငျြးစီ ခြှတျနကွေပုံကို ကုတငျပျေါမှ အရသာခံကာ ကွညျ့နရေငျး ကြှနျနေျာ့ ငပဲကလညျး အစှမျးကုနျမာနျဖီနပေီ ။ ကြှနျနျောလညျး ပုဆိုး အကြီတှေ ခြှတျ ပဈလိုကျတော့တယျ ။ အဝတျတှေ ခြှတျပီး ကွညျ့လိုကျတော့ ဇငျဇငျနဲ့သကျမှနျက ကုတငျအောကျမှာပဲ မတျတပျရပျရငျး တဈ ယောကျနို့ တဈယောကျ ပှတျကာ ကိုယျလုံးတီး ကိုယျစီဖွငျ့ နုတျခမျးတှေ ကဈဆငျ ပေးနကွေသညျ ။ ကြှနျနျောလညျး ကုတငျပျေါမှ ဆငျးကာ သူတို့ နှဈယောကျလုံးရဲ့ ကိုယျလုံးတှကေို ဖကျလိုကျကာ သုံးယောကျသား ကဈဆငျပေးလိုကျတယျ တဈယောကျတလဲ ကဈဆဈ ပေးနတေုနျး ဇငျဇငျက ကြှနျနေျာ့ လီးတံကို ကိုငျကာ ပှတျနတေုနျး သကျမှနျကလညျး ကြှနျနေျာ့ ဥလေးတှကေို ခပျဖှဖှလေး ပှတျပေးနတေော့တယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လီးခြောငျးကွီးမှာလညျး ဆေးစှမျးကွောငျ့ကော ဘီယာရှိနျကွောငျ့ပါ မာနျထကာ ထောငျမတျနေ ပီ ။
ငါးမိနဈလောကျ ကဈဆငျပေးပီးသှားခြိနျမှာ ဇငျဇငျနဲ့သကျမှနျ နှဈယောကျသား ဒူးထောကျထိုငျလိုကျကွကာ ကြှနျနေျာ့ လီးတံကို နှဈယောကျသာ တဈလှညျ့စီ စုပျကွတော့တယျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ အားးး အာ…အားးးးး လီးတဈခြောငျးတညျးအား ဇငျဇငျနဲ့ သကျမှနျ နုတျခမျး တဈဘကျတဈခကျြစီဖွငျ့ ပှတျဆှဲလိုကျတိုငျး ကွကျသီးမြားပငျထလာအောငျ ကောငျးနတေော့တယျ ။ ဇငျဇငျ က ကြှနျနေျာ့ လီးတံ ကို ကိုငျစှဲလိုကျကာ သကျမှနျ နုတျခမျးထဲကို ထိုးထညျ့ပေးလိုကျတော့ သကျမှနျက နုတျခမျးလေး အသာဟကာ ငုံစှဲ လိုကျတော့တယျ အားးး ကောငျးလိုကျတာ အားးး ဇငျဇငျက ငွီးငွူနတေဲ့ ကြှနျနေျာ့ ကို မော့ကွညျ့လိုကျကာ ခပျပွုံးပွုံးလေး ဖွငျ့ လြှာလေး တဈခကျြသပျလိုကျရငျး အရမျးကောငျးနလေား ယောကငြ်္ား သကျမှနျက အစုပျ မပွတျ အငျးးးး ကောငျးတယျ မိနျးမ အရမျးကောငျးတယျ အားးး ရှီးးးး မိနျးမ နှဈယောကျက ကြှနျနေျာ့ လီးကို အငမျးမရ စုပျနကွေတယျ ။
စုပျနကွေတဲ့ မိနျးမ နှဈ ယောကျကလဲ တဈယောကျက ခယျမလေး တဈယောကျက ယောကျဖ ရဲ့ မိနျးမ ဆိုတော့ ကြှနျနေျာ့ လီး ဘယျလောကျတောငျ ကောငျးနမေလဲ ဆိုတာ တှေးကွညျ့လိုကျပါတယျဗြာ .. ဆယျငါးမိနဈလောကျကွာအောငျ လီးစုပျတာ ခံပီးနောကျ ကြှနျနျောက ကု တငျပျေါတကျလိုကျကာ ပကျလကျလှနျလိုကျတော့ နှဈယောကျသား ကုတငျပျေါ တကျလိုကျလာပီး ဇငျဇငျက အောကျပိုငျးမှာ ကြူံ့ ကြူံ့လေး ထိုငျကာ လီးစုပျတော့တယျ ။ သကျမှနျကတော့ ကြှနျနေျာ့ မကျြနှာပျေါ တကျခှကာ သူ့အဖုတျကွီးကို ကြှနျနေျာ့ ပါးစပျပျေါ တပေ့ေးလိုကျတယျ ။ အောကျပိုငျးက လီးစုပျတာ ခံရငျး သကျမှနျစကျပတျကို ဖွဲကာ ယကျပေးလိုကျတော့တယျ ။ သကျမှနျအဖုတျ ထဲမှ အရညျတှေ လညျး အရမျးရှဲစိုကာ ထှကျနပေီ ။
ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ အားးး ကောငျးတယျ ကိုကွီး အားးး ယကျပေး အစိကို စုပျပေး အားးးရှီးးးးပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ အားးးး ရှီးးး ခနနတေော့ လီးစုပျနတေဲ့ ဇငျဇငျက ကြှနျနေျာ့ လီးပျေါ တကျခှကာ အဖုတျဝမှာ တေ့ လိုကျပီး ထိုငျခကြာ တကျစောငျ့ပါတော့တယျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ အားးး အားးးအားး ရှီးးးအားးး အမလေးးးအားးးကောငျးလိုကျတာ ယောကငြ်္ား အားးး ကြှနျနေျာ့ မကျြနှာမှာလဲ သကျမှနျ ရဲ့ စောကျရညျတှေ ရှဲနပေီ သကျ မှနျရဲ့ စောကျစိကို ဆှဲဆှဲ စုပျရငျး နဲ့ သကျမှနျ စအိုလေးကို ပါ လကျခလယျလေး ဖွငျ့ ထုတျလိုကျသှငျးလိုကျကာ ကလိပေးလိုကျတော့ သကျမှနျတဈယောကျ ဖငျကွီး ကော့ကော့ သှားကာ အားးး အားး ကောငျးတယျကိုကွီး အားးး အမလေးးး ဖငျဝလေးကို လြှာထိပျလေး နဲ့ စှဲပေးလိုကျတယျ ဆိုရငျပဲ သကျမှနျတဈယောကျ ကုတငျဘောငျကို လကျလှမျးထောကျကာ တငျပါးကွီး ကော့ ကော့သှားကာ ဖကျြဖကျြလူး ဖွဈသှားတော့တယျ ။ အောကျမှ ဇငျဇငျ ရဲ့ စောငျ့ခကျြတှကေလညျး ပိုပိုပွငျးထနျလာတယျ ။
အားးး ကောငျးတယျ အားးဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ အားးး ရှီးးးးးအားးးအားးး ကိုကွီး သကျမှနျကို တလှညျ့ လိုးပေးဦး မနနေိုငျတော့ဘူး အငျးးး သကျမှနျ ဖငျကုနျးလိုကျနျော သကျမှနျတဈယောကျ ကြှနျနေျာ့ မကျြနှာပျေါ တကျခှနရောမှ အောကျကို ဆငျးလိုကျပီး ဖငျဘူးတောငျး ထောငျကာ လေးဘကျကုနျးလိုကျသညျ ။ ဇငျဇငျကလညျး အလိုကျတသိ အပျေါမှ တကျခှစောငျ့နရောမှ ဆငျးလိုကျတယျ ဘလှတျ အသံနဲ့အတူ ဇငျဇငျ့ စောကျဖုတျထဲမှလီးတံကွီး ကြှတျထှတျသှားသညျ ။ လီးတံကို ငုံကွညျ့လိုကျတော့ လီးတံတလြောကျမှာကော ဥတှမှောပါ ဇငျဇငျ့စောကျရညျတှေ ရှဲနတေယျ ။ လီးတံမှ စောကျရညျတှကေို သကျမှနျ ရဲ့ ဖငျဝမှာ သုတျလိမျးပေးလိုကျရငျး စအိုဝ လေးကို ဒဈဖြားလေး နဲ့ ဖိကာဖိကာ ပှတျပေးလိုကျတယျ သကျမှနျ ..ကိုကွီး သကျမှနျ ဖငျကို လိုးမယျနျော ဆိုတော့ အငျးး…ကိုကွီး ကွိုကျသလိုလုပျကှာ ဆိုပီး ဖငျလေး ကော့ပေးတော့တယျ ။
ခယျမလေး ကို ဖငျလိုးရတော့ မယျ ဆိုတဲ့ အသိကွောငျ့ လီးဒဈကွီး တောငျ ပိုကားလာသလို ခံစားလိုကျရတယျ ဇငျဇငျ ..သကျမှနျ ဖငျကို နဲနဲ ဖွဲထားလိုကျကှာ ဟုတျ .. ယောကငြ်္ား ပီးရငျ ဇငျ့ကို လညျး ဖငျလိုးပေးနျော `ဟားးးး ရတယျ ဒီည ငါ့မိနျးမ အသဈကလေး နှဈယောကျလုံးကို ဖငျကော အဖုတျကော ပါးစပျကော အကုနျ လိုးပေးမယျ စိတျခြ ဇငျဇငျက သကျမှနျတငျပါး နှဈခွမျးကို ဆှဲဖွဲလိုကျတယျ ။ စအိုညိုတိုတိုလေး ပှစိပှစိ ဖွငျ့ နဲနဲ ဟသှားတာ နဲ့ လီး ဒဈကို ဖွေးဖွေးခငျြး ထိုးသှငျးပေးလိုကျတယျ
အားးး ကိုကွီး အားးး နာတယျ အငျး အငျး ကိုကွီး ဖွညျးဖွညျ့သှငျးပေးမယျနျော ဗဈြ ..ဗဈြ.. အားး လီးဒဈဝငျသှားပီ အားး လေ ဘကျကုနျးထားရငျး သကျမှနျတဈယောကျ အိပျယာခငျးစတှကေို လကျနဲ့ ကဈြကဈြ ပါအောငျ စုပျကိုငျထားမိတယျ ဖငျဝမှာ တဈစို့စို့ ကွီး ဖွဈနတေယျ ဖွေးဖွေးခငျြးဝငျသှားသော လီးတံတလြောကျ ဖငျစအို ဘေးသားလေးတှပေါ ကပျပါသှားတယျ ။ အားးး အားးး သကျမှနျ အကုနျဝငျတော့မယျ ဆကျသှငျးမယျနျော အငျးး လုပျ အားးး တဖွညျးဖွညျး လီးတံက သကျမှနျ စအိုထဲသို့ တဈခြောငျး လုံးဝငျသှားတော့တယျ ဇငျဇငျ သကျမှနျဖငျဝပျေါ တံတှေး ထှေးပေးလိုကျ အသှငျး အထုတျ လုပျတော့မယျ အငျး အငျး.. ပဈြ .. ဇငျဇငျက လီးဝငျနတေဲက သကျမှနျ စအိုပျေါကို တံတှေး ထှေးခလြိုကျတယျ ။ ကြှနျနျောလညျး သကျမှနျ ခါးသိမျသိမျလေးကို ကိုငျ ကာ ဖွေးဖွေးခငျြ လီးတံကို ပွနျဆှဲထုတျလိုကျ ဖွေးဖွေးခငျြး ပွနျသှငျးလိုကျဖွငျ့ တျောတျောကွာနတေော့ အဆငျခြောလာတယျ တဖွညျးဖွညျး အရှိနျမွှငျ့ကာ အထုတျအသှငျးလုပျနခြေိနျ ဇငျဇငျက သကျမှနျပေါငျကွားထဲလကျထညျ့ကာ စောကျဖုတျကို ကလိပေး နတေော့တယျ။
သကျမှနျတဈယောကျ ဖငျလိုးခံရငျး အဖုတျကလိပေးခံနရေတာကွောငျ့ ကာမစိတျတှေ ပိုပို ဖွဈလာကာ သူမ ဖငျကွီးကို ပိုကော့ ကော့ပေးနမေိတယျ အငျးးး အငျ့ အားးး ရှီးးး ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ အားးး ကိုကွီး ကောငျးလိုကျတာ လိုး အားးးစောငျ့လိုးပေး ခံလို့ ကောငျးနပေီ အငျ့ အငျ အငျ့ ရော့ ရော့ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ အားးး အမလေးးအားးးကောငျးလိုကျတာ သကျမှနျဖငျက စီးကွပျနေ တာပဲ အားးး သကျမှနျလညျး ဖငျသားတှကေ လီးတံကို ပွနျပွနျညှဈပေးနမေိတယျ အားးးအားးး ဘှတျ ဘှတျ ဇှပျ အားးး အားးး အားးအားးး သကျမှနျ ဖငျကို ကိုကွီး လိုးနပေီ အားးကောငျးလိုကျတာ အားးး အငျးးကိုကွီး လိုးပါ အားးးသကျမှနျ ဖငျခံပေးနေ တယျ အားးး အမေ့ အားးး ဆကျတိုငျ စောငျ့လိုးနတောကွောငျ့ ဖငျဝမှာ ပိုကယျြလာကာ အဆငျခြောလာခြိနျ ယောကငြ်္ား ဇငျ့ကို လညျး ဖငျလိုးပေးဦးလေ ဆိုကာ သကျမှနျဘေးနားမှာ ဇငျဇငျက ဖငျလာကုနျးတယျ
အငျးး လာခဲ့ ငါ့မိနျးမ အသဈလေး နှဈယောကျလုံး ဖငျတလှညျ့စီ ခပြေးမယျ ဟု ဆိုကာ ဇငျဇငျ့ ဖငျဝကိုလီးတံ တပေီ့း ထိုးသှငျး လိုကျတော့တယျ အားးး ယောကငြ်္ားးအားးအို…ကွပျတယျ အားးးအမလေးးးးအားးး ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ အားးး အသဈစကျစကျ စအို နှဈပေါကျကို ခနြရေတာကွောငျ့ လီးတံတောငျ ကြိနျးစပျလာတယျ ။ ဇငျဇငျ့ ဖငျကို လိုးနရေငျး သကျမှနျ စောကျဖုတျကို လကျတဈဘကျဖွငျ့ ကလိပေးနလေိုကျတယျ ။ အခနျးထဲမှာ လိုးသံတှေ အျောသံတှေ ဆူညံနတေော့တယျ ။ အားးး ကောငျးတယျ အားးရှီးးး ဘှတျ ဘှတျ ဗဈြ ဗဈြ ဗဈြ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ အားးး ယောကငြ်္ား အားးး အမလေးးးအားးး လိုးပါ ဖငျ ကှဲခငျြကှဲပါစေ လိုးပါ အားးစောငျ့ စောငျ့ သကျမှနျ စောကျဖုတျကို ကလိနရေငျး ညလကျဖွငျ့ ဇငျဇငျ့ တငျပါးကွီး ကို ခပျဆကျဆကျ ဖွောငျးခနဲ တဈခကျြရိုကျပဈလိကျတယျ တငျပါးကွီးတဲ့ ဇငျဇငျရဲ့ တငျးပါး ကွီး မှာ ရဲခနဲ လကျရာကွီး ထငျသှားပီး တငျး ပါးသားတှေ တုနျခါသှားတယျ
အားးးး ကောငျးတယျ ရိုကျပါ အားးး ဇငျ့ဖငျကို ခြ အားးး ဖွောငျး ဖောငျး ဖွောငျးးး အားးး ဘေးမှ သကျမှနျ တငျပါး ခပျသေးသေးကို ပါ တဈခကျြ ရိုကျပဈလိုကျတယျ ဖွောငျးးးးးး အားးး ကိုကွီး အားးး သကျမှနျ ထဲ ထညျ့ပေးဦး ဟု ဆိုလာသဖွငျ့ ဇငျဇငျ့ ဖငျထဲမှ လီးတံကို ခြှတျလိုကျကာ သကျမှနျ စောကျဖုတျ ထဲ ထညျ့လိုးလိုကျပွနျတယျ အားးး ကောငျးလိုကျ တာ အားးး လိုးလိုး အားးး ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ အမလေးး သကျမှနျ ရယျ ကောငျးလိုကျတဲ့ စောကျဖုတျ အားးး အားးး စောငျ့ပါ ကိုကွီး လိုးလိုး တအားစောငျ့ အားးးကောငျးတယျ အငျ့ အငျ့ ရော့ ရော့ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ အားးး ငါလိုးမ ခယျမလေး စောကျဖုတျ အားးးအငျ့ အငျ့ အငျ့ အားးးလိုးပါ ကိုကွီး စိတျကွိုကျလိုး သကျမှနျ ကိုကွီး လီးနဲ့ ခံခငျြနတောကွာပီ အားးးလိုး အားးး အားးးကောငျးတယျ လာဇငျဇငျ သကျမှနျ နဲ့ အောကျကို ဝငျပီး ထပျထားလိုကျ အတူတူ လိုးပေးမယျ ဇငျဇငျလညျး သကျမှနျ အောကျကို တိုးဝငျလာပီး အဖုတျခငျြးထပျထားလိုကျတာမို့ သကျမှနျကို တလှညျ့ ဇငျဇငျ့ကို တလှညျ့ အဖုတျလိုးပေးလိုကျတယျ
အားးးး ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ အားးး လိုးပါ အားးး အငျ့ ရော့ ရော့ အားးး နာရီဝကျ ကြျောကြျောလောကျထိ လိုးလိုကျ ပီး လီးတံတလြောကျ ကငျြတကျလာကာ ပီးခငျြလာသလိုဖွဈလာတယျ ။ အားးအားး ကိုကွီး ပီးတော့မယျ အားးးး ဇငျဇငျ့ စောကျ ဖုတျ ထဲမှ လီးတံ ကို ဆှဲခြှတျလိုကျပီး ကုတငျပျေါမှာ မတျတပျရပျလိုကျတယျ ထ ..နှဈယောကျလုံး ဒူးထောကျထားလိုကျ မကျြနှာ ပျေါ လရေ ပနျပေးမယျ ပွောလိုကျတော့ ဇငျဇငျရောသကျမှနျပါ နှဈယောကျသား ဒူးထောကျထိုငျကာ ပါးခငျြးအပျလကျြ ကြှနျနျော့ လီးတံရှမှေ့ာ လြှာလေး တှေ ထုတျထားကွတယျ စောကျရညျတှေ ဖွငျ့ခြောမှတျနတေဲ့ လီးတံကွီးကိုကိုငျကာ ဇငျဇငျ နဲ့ သကျမှနျ မကျြနှာရှမှေ့ာ လေးငါးခကျြ ဂှငျးတိုကျလိုကျတာ နဲ့ လရတှေေ ဖြောခနဲ ဖြောခနဲ သကျမှနျနဲ့ ဇငျဇငျ့ မကျြနှာတှပေျေါကိုပနျးထှကျကုနျ တော့တယျ ။
အားးး အားးးအူးးးးးးး ထှကျပီ အားးးး ကြှနျနေျာ့ ဥလေးတှကေို လှမျးကိုငျရငျး ဇငျဇငျက ကြှနျနေျာ့ လီးတံကွီးမှ လရတှေကေို စှဲစုပျ တောတယျ ။ နှဈယောကျလုံး မကျြနှာပျေါမှာ လရဖွေူပဈြပဈြတှေ ရှဲစိုကုနျတောတယျ အားးး ကိုကွီးမိနျးမ မိုး နဲ့ လိုးရတာတောငျ ဒီလောကျမကောငျးဘူးကှာ လီးတံကို ဇငျဇငျ့ ပါးစပျထဲမှာ ခြှတျကာ ကုတငျပျေါတှငျ ဒူးတှညှေတျကကြာ လှဲခလြိုကျရငျးပွောလိုကျ တယျ ဇငျဇငျနဲ့ သကျမှနျကတော့ တဈယောကျမကျြနှာပျေါတဈယောကျ လြှာဖြားလေးမြားဖွငျ့ ပနေသေောလရေ လကျကနျြမြားကို ယကျပဈလိုကျကာ မြိုခလြိုကျရငျး ကြှနျနျောဘေး တဈဘကျတဈခကျြတှငျ လှဲလိုကျကွတော့တယျ ။ ဇငျဇငျလညျး အရမျးကောငျး တယျ ယောကငြ်္ားရယျ မမမိုး ပွနျမလာခငျထိ ကိုကွီး မိနျးမ အဖွဈနမေယျနျော ဟိတျ … မမဇငျ နျော အဲ့လို မရပါဘူး သကျမှနျ လညျး နဦေးမှာပေါ့ အငျးပါ မိနျးမလေးတှရေယျ မိုးပွနျမလာခငျထိ ဇငျဇငျကော သကျမှနျကော နှဈယောကျလုံးကို ညတိုငျး လိုးပေး ပါ့မယျ နှဈယောကျလုံး ကိုကွီး မိနျးမ တှေ ပါပဲနျော သုံးယောကျသား သဘောကစြှာ ရယျမလိုကျတယျ ဒါနဲ့ သကျမှနျက အလိုးခံ ဖူးတာလား ကိုကွီးက သကျမှနျ ကို အပြိုလေးပဲ မှတျနတော ဟှမျးးးး ကိုကွီး တို့လငျမယား လိုးနသေံတှကွေားပီး မနနေိုငျလို့ ရညျ စားထားပီး ခံဖွဈခဲ့တာပါ ဒါပမေယျ့ အခုမှ ကိုကွီးကို ပထမ ဆုံး ဖငျပါခံပေးဖူးတာပါနျော
ဟုတျလားး ဒါဆို သကျမှနျဖငျက ကိုကွီး လီး ပထမ ဆုံး ဝငျဖူးတာပေါ့နျော ခံလို့ကောငျးလား ဖငျလိုးတာ အငျးပေါ့ အစတော့ မ ကောငျးဘူး နာ တယျ ခံရငျး နဲ့ ကောငျးလာသလိုပဲ ဇငျဇငျကော ကောငျးလို့ ခံတာပေါ့ ယောကငြ်္ားရယျ ဇငျဇငျ ကော လီး ဘယျ နှခြောငျး ခံဖူးတာလဲ ဟှမျး ပွောတော့မယျ ဇငျက ယောကငြ်္ားနဲ့ ဟော့ဒီ ယောကငြ်္ား အသဈ လေး နဲ့ နှဈခြောငျးထဲ ခံဖူးတာပါ နျော ကဲ ဇငျ တို့ ရသှေားဆေးတော့မယျ ဟုဆိုကာ ဇငျဇငျ နဲ့ သကျမှနျ တဈယောကျခါး တဈယောကျဖကျကာ ရခြေိုးခနျးအတှငျး လှုပျလီ လှုပျလဲ့ ဖွငျ့ ဝငျသှားကွပါတော့တယျ ။ ဇငျဇငျ နဲ့ သကျမှနျရဲ့ နောကျကြောပွငျ အလှလေးတှကေို ငေးကာ အှမျးးးး ငါတော့ မိနျးမ ပွနျမလာခငျထိ ရှရေညျစိမျ လှတျလပျရေးကို ခယျမလေးနဲ့ ဇငျဇငျ တို့ ဖငျတှေ အဖုတျတှေ ပါးစပျတှကေို အားရပါးရ လိုးရငျး ကုနျဆုံးရမှာပဲ ဟုတှေးကာ တဈယောကျတညျး ပွုံးမိလိုကျပါတော့သညျ …..
လိုးသူ ခံသူ စိတ်ကြည်ဖြူ
အိမ်မှာ ကျွန်နော် ရယ် ကျွန်နော့် ခယ်မလေး သက်မွန်ရယ် ကျွန်နော့် ယောက်ဖ ရဲ့ မိန်းမ ဇင်ဇင် ရယ် သုံးယောက်ပဲ ရှိတယ် ။ ကျန်တဲ့ အိမ်သားတွေ အကုန် ဘုရားဖူး ထွက်သွားကြတယ် ။ ကျွန်တော် က အစိုးရ ဝန်ထမ်း ခွင့်မရတာ နဲ့ မလိုက်ဖြစ်ဘူး သက်မွန်နဲ့ဇင်ဇင် က အထည်ဆိုင် မှာ အရောင်းစာရေးမ လုပ်နေကြတာ ဆိုတော့ သူတို့ လည်း ခွင့်မရတာ နဲ့ မလိုက်သွားဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ ဇင်ဇင်က သူယောက်ကျား ကျွန်နော့ ယောက်ဖ စင်္ကာပူ မှာ အလုပ်သွားလုပ်ကတည်းက အိမ်မှာ လာနေဖြစ်တာ ခြောက်လ လောက်ရှိပီ ။ အိမ်မှာ နေရင်းနဲ့ပဲ ခယ်မလေး သက်မွန် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အထည်ဆိုင်မှာ အရောင်းဝန်ထမ်း အဖြစ် သူပါ ဝင်လုပ်နေတာ ။ ခယ်မလေး သက်မွန် က ပိန်ပိန်သွယ်သွယ် ဇင်ဇင်က တော့ သိပ်မပိန်ဘူး အရမ်းလည်း မဝဘူး ။
ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က ဇင်ဇင်က ပိုကြည့်ကောင်းတယ် ။ တင်တွေရင်တွေ ထွက်တယ် ကြည့်ကောင်းတယ် ။ သက်မွန်ကတော့ နဲ နဲ ပိန်တယ် ဒါပေမယ့် သက်မွန်နဲနဲခေတ်ဆန်တယ် အတို အကြပ်လေး တွေ ဝတ်တတ်တယ် ။ ဇင်ဇင်ကတော့ အိမ်ထောင်သည် မို့လားမသိ မြန်မာဝတ်စုံ ပဲ အဝတ်များတယ် ။ ကျွန်နော့် ယောက်ဖ နဲ့ ရပီး လေးလကျော်လောက်မှာ ယောက်ဖ က ပြည်ပ ထွက် သွားတာ ။ အခု ထိ ငွေ သိပ်မပို့နိုင်သေးတော့ ဇင်ဇင်လည်း ကျွန်နော့် အိမ်မှာ ပဲလာနေဖြစ်တယ် ။ အိမ်မှာ က မိန်းမရယ် ကျွန်နော် ရယ် ကျွန်နော့် အမေ ရယ် ကျွန်နော့် ညီမရယ် ခယ်မလေး သက်မွန်နဲ့ ဇင်ဇင် တို့နေကြတာ ။
အခု ကျန်တဲ့သူတွေ အားလုံး ဘုရားဖူး ထွက်သွားကြတာ ဆယ်ရက်လောက်ကြာမယ် ။ အခု ကျွန်နော်တို့ သုံးယောက်ပဲကျန်ခဲ့တာ ပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးလ လောက်ကတည်းက ကျွန်နော် သတိထားမိတာ ကျွန်နော့် ကို ဇင်ဇင် တစ်ယောက် အထာတွေ ခင်းကျင်း နေသလိုပဲ ။ လူလစ်ရင်လစ်သလို အကြည့်တွေ က တမျိုးပဲ ။ ကျွန်နော် လည်း မိန်းမ ရှိပေမယ့် ဇင်ဇင်ကို စိတ်ဝင်စားနေမိတာ ။ လူလစ်ရင် ကျွန်နော့် ရှေ့မှာ ထမိန် ဖြန့်ဖြန့် ပီး ဝတ်ပြတာ ခနခန ။ အသက် ၂၆ ပဲရှိသေးပီး ယောကျား နဲ့ ခန ပဲ တူတူ နေလိုက်ရတဲ့ သူ့ အတွက် တခုခု လိုနေမှာ ကျွန်နော် သိတာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် အိမ်မှာ က လူက သိပ်မလစ်ဘူး ။ ဒီနေ့ စနေနေ့ ဆိုတော့ ကျွန်တော် က ရုံးပိတ်လို့ အိပ်ယာ နောက်ကျမှ ထဖြစ်တယ် ။ မိန်းမ လည်း မရှိတာ နဲ့ အေးဆေး နှပ်နေတာ ။ ကိုးနာရီလောက် ကျမှ အိပ်ယာ ထ မျက်နှာသစ်ပီး တခုခု စားမလို့ မီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်လိုက်တော့ ဇင်ဇင်ကို တွေ့လိုက်မယ်တယ် ။ အလုပ်မသွားဘူးလား မသိ ။ ခယ်မလေး တော့ အရိပ်အယောင် မတွေ့ရ ။
ဇင်ဇင် အလုပ်မသွားဘူးလား သက်မွန်ရော မသွားဘူး ကိုရဲ သက်မွန်က သွားတယ် ဇင်က ဒီနေ့ နားချင်လို့ မနေ့ကတည်းက ခွင့် တိုင်ခဲ့တာ အော်… ကျွန်နော် ဇင်ဇင်ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ် ။ သနပ်ခါး ပါးကွပ်ကြားလေးနှင့် ဆံပင်တွေ ကို နောက်လှန် စည်းထားတယ် ။ အပေါ်က တီရှပ် အကြပ်လေးနှင့် အောက်က ထမိန် အပြာရောင် အပျော့သားလေး နှင့် ချစ်စရာ ကောင်းနေတယ် ။ ဇင်ဇင် အရမ်းလှနေပါလား ကိုရဲ ကလည်း မြှောက်နေပြန်ပီ ဘာစားချင်လို့လဲ ဇင်ဒီနေ့ အလုပ်နားတာ စားချင်တာရှိကျွေး ပါ့မယ် ခုလည်း ဘရိတ်ဖတ် ပြင်ပေးထားပါတယ် စားလိုက်ဦး တကယ် စားချင်တာ ကျွေးမလို့လား ကျွေးမှာပေါ့ ကိုရဲ က ဘာ စားချင်လို့လဲ ညူတူတူ မျက်လုံးရွဲ ဖြင့်ကျွန်နော့် ကိုကြည့်ပြောတယ် ။
ဇင်ဇင် ကျွေးတာပဲ စားမှာပါ မြှောက်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး တကယ်လှ လို့ လှတယ် ပြောတာပါ မျက်နှာကလည်း သနပ်ခါးလေး နဲ့ ချစ်စရာ ခန္ဒာကိုယ်ကလဲ စွဲဆောင်မှု ရှိတယ်လေ မမမိုးလောက် မလှပါဘူးနော် .. ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ် ကျွန်နော့် မိန်းမ မိုးမိုးလွင် လောက်တော့ မလှပါ ။ ကျွန်နော့် မိန်းမ ကို မမမိုး လို့ ခေါ်ကြတယ် ။ ကျွန်နော့် မိန်းမ က နန္ဒာလှိုင် တို့လို ဘော်ဒီ မျိုး မြန်မာဆန်ဆန် ဝတ်ထားလိုက်ရင် အပြင်ထွက်ရင် လူတွေတော်တော်ငေး ။ ကျွန်နော် လည်း အဲ့အလှ ကို စွဲ မက်လွန်းလို့ မိုးကို မရမက ခိုးပြေးပီး ယူထားတာလေ ။
လှပါတယ် မိုးက လည်း အလှ တမျိုးပေါ့ ဇင်ဇင်က လည်း အလှတမျိုး စွဲ ဆောင်မှု တမျိုးပေါ့ နှစ်ယောက်လုံးလှပါတယ် ကဲ ဟုတ်ပါပီ ကိုရဲ ရယ် နှစ်ယောက်လုံး လှ တယ်ဆိုလို့ မမမိုး လိုပဲ ကိုရဲ စားချင်တာ ကျွေးပါ့မယ် ရော့ လောလော ဆယ် ထမင်းကြော် နဲ့ ကြက်ဥကြော် ထားတယ် ကော်ဖီ လဲ ဖျော်ထားပီးပီ စားလိုက်ပါဦး ကျွန်နော့် အတွက်ထမင်းကြော် ပန်းကန်တွေ ပြင်ပေးပီး သူနဲ့ သက်မွန် အိပ်တဲ့ အခန်းဘက်ကို လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ ဖြင့် ထွက်သွားတယ် ။ နောက်ပိုင်း အလှ ကို ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်မိလိုက်သေး တယ် ။ ထမင်းကြော် စားရင်း ကျွန်နော် စဉ်းစားနေမိတယ် ။ ဒီနေ့ အိမ်မှာ ကျွန်နော် တစ်ယောက်တည်း ကျန်နေမှာ လဲ သိနေတယ် ဇင်ဇင် အလုပ် ဘာကြောင့်မသွားတာလဲ ။
စကားတွေက လဲ အထာတွေ ပေးနေတယ် ။ ကျွန်နော့် ဘက်က စလိုက်ရင် ပါလာ ဘို့ ကျိန်းသေ သလောက်ရှိတယ် ။ တစ်ယောက်ယောက် သိသွားမှာလဲ စိုးရိမ်တယ် ။ စမ်းလည်းစမ်းကြည့်ချင်တယ် ။ နောက်ဆုံး ဘရိတ်ဖတ်စားတာ လက်စသတ် လို က်ပီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ် စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ ။ ထမင်းစားပွဲ က ထပီး ဇင်ဇင်ရှိရာ အခန်းဘက်သို့ လာခဲ့လိုက်တယ် ။ခန်း စည်းစလေး အသာ လှပ်ကြည့်လိုက်တော့ အိပ်ယာပေါ် မှာ ပက်လက်လှန်ပီး စာစောင် ဖတ်နေတာ တွေ့လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ကို မြင်တော့ ကိုရဲ ဘာလိုချင်လို့လဲ ဇင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ရပါတယ် ဇင်ဇင် လည်း ပျင်းနေမလားလို့ စကားပြောရအောင်လို့ ကိုကြီး လဲ တစ်ယောက်တည်း ပျင်းနေလို့ ဝင်ခဲ့မယ်နော် ဟုတ်လာလေ ကိုရဲ ကုတင်ပေါ်က တင်ပြင်ခွေလေး ထထိုင်တယ် ။ ကျွန်နော် လည်း သူ့ ကုတင်ပေါ်မှာပဲ တူတူ ထိုင်လိုက်ပီး ရောက်တက်ရာရာတွေ ပြောနေလိုက်တယ် ။ ရီစရာတွေ ပြောရင် ဇင်ဇင်က လိုက်ရီ ပီး ကျွန်နော့် ပေါင် တို့ ပုံခုံး တို့ ကို လာလာ ပုတ်တယ် ။ ကျွန်နော် လည်း စကားပြောရင်းသွေးတိုး စမ်းခါ သူ့ ပုခုံးတို့ ပေါင် တို့ ကို ထိ ကြည့်တယ် ။ ဇင်ဇင် က မသိသလို နေတယ် ဘာမှ မပြောဘူး ။
ကျွန်နော် တို့လင်မယား မယူခင်က အကြောင်းတွေပြော သူတို့လင်မယား မယူခင်က အကြောင်းတွေ ပြောပေါ့ ။ အပြင်မှာ ချိန်း တွေ့ ကြတာတွေ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေ ပန်းခြံ သွားတာတွေ ပြော ပေါ့။ ပြောနေရင်း နဲ့ ကျွန်နော့် လက်ကို သူ့ပေါက်ပေါ် တင်ထား ရင်း လက်ကို ပြန်မရုတ်ပဲ ခပ်ကြာကြာနေလိုက်တယ် ။ တအိမ်လုံးမှာ သူနဲ့ကျွန်နော် နှစ်ယောက်တည်း ဆိုတဲ့ အသိရယ် တကုတင် တည်းမှာ တူတူ ထိုင်နေတယ် ဆိုတဲ့ အသိရယ်က ရင်ထဲမှာ ရင်ခုန်နှုန်း မြန်လာစေတာတော့ အမှန်ပဲ ။ ကျွန်နော့် လက်က သူ့ ပေါင် ပေါ် မှာ ဖြေဖြေးချင်းလေး ပွတ်နေမိတယ် ။ ခနနေတော့ စကား ခန ပြတ်သွားပီး ကျွန်နော့် ကို စိုက်ကြည့်လာတယ် ။အကြည့်ချင်း တော်တော်ကြာအောင်စုံနေမိတယ် သူ့ရင်ထဲ ဘာလိုချင်နေတယ် ကျွန်နော် ရင်ထဲ ဘာလိုချင်နေတယ် ဆိုတဲ့ ဆန္ဒတွေကို တစ် ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အသံတိတ်ပြောနေမိသလိုပဲ။ ခနတာ အခိုက်အတန့်လေးမှာပဲ ဇင်ဇင့် ကို ကျွန်နော် ဆွဲပွေ့မိလိုက်ပီး နုတ် ခမ်းတွေ နမ်းပစ်မိလိုက်တယ် ။ ထိုင်နေရာကနေ ဇင်ဇင်က ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး ဖြစ်သွားပီး ကျွန်နော်က သူ့ အပေါ်မှာ မိုးပီး နမ်းနေမိတယ်။ ခန ကြာတော့ နုတ်ခမ်းချင်း ခွာမိလိုက်တယ် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြည့်နေရင်း မမမိုး သိမှာ မ ကြောက်ဘူးလား မသိအောင်နေမှာပေါ့ မကြောက်ပါဘူး ဒါဆို ဇင်လည်း မကြောက်တော့ဘူးနော်တဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေပီပီ အရာရာ ကို ရှက်ရွံ့မှုမရှိ ။ တစ်ယောက်လိုအင် တစ်ယောက်သိနေပီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကာမနွံထဲ မှာ ပျော်ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ နှစ်ယောက်လုံး အဝတ်အစားတွေ ချွတ်လိုက်တယ် ။။
အိုးးး လှလိုက်တဲ့ နို့သီးလေး အစို့မခံ အကိုင်မခံရတာ ကြာလို့ထင်တယ် နို့သီးခေါင်းလေး က တင်းနေတာပဲ ။ နို့ လေး တွေကို ကိုင် ညှစ်ရင်း ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့ပေးလိုက်တယ် . ဇင်ဇင် လက်တဘက်က ကျွန်နော့် ခေါင်းကို ကိုင်ထားရင်း လက်တဘက်က သူ အဖုတ်နေရာလေး အားပွတ်နေတယ် ။ အဖုတ်မှာ အမွှေးတွေက မထူ မပါး။ဇင်ဇင်က အသားဖြူတော့ အမွှေး မဲမဲလေးတွေက ဆီးခုံပေါ်မှာ ထင်းနေတယ် ။ နို့တွေ စို့ နေရာက နေ တဖြေးဖြေး အောက်လျောဆင်းလာပီး ဆီးခုံးပေါ်မှာ စောက်မွှေးလေးတွေ ကို လျှာ နဲ့ တချက်သပ်လိုက်တယ် ဇင်ဇင် တစ်ယောက် ခေါင်း ထောင်ကြည့်ပီးကိုရဲ မှုတ်ပေးမလို့လား အင်း မကြိုက်ဘူးလား ဇင် က ကြိုက်တာပေါ့ ပီးမှ ကိုရဲ ကိုလည်း ပြန်မှုတ်ပေးမယ် ပောပြောဆိုဆို ပေါင်ကို ပိုကားလိုက်ပီး တင်ပါအောက် ကို ခေါင်းအုံး ခု လိုက်တယ် ။ အဖုတ်က ပြူထွက်လာတယ် ။ ကျွန်နော့် ခေါင်းကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကိုင်ပီး သူ့ စောက်ဖုတ်ပေါ် ဖိကပ်လိုက်တယ် ။ အသက်ရှုတောင် နဲနဲ ကြပ်သွားတယ် အဖုတ်မှာ စောက်ရည်တွေ က ရွဲနေပီ ။ အဖုတ်ကြီး ကို ကော့ကော့ပေးရင် ကျွန်နော်ယက်ပေး တာ ကို ခံနေတယ် ။ ပါးစပ်က လည်း တအင်းအင်း နဲ့ ညီးနေပီ။ အင်းးး အားးး ကိုရဲ အားးး ကောင်းတယ်ကွာ အားး မှုတ်ပါ ယက်ပါ နော် အားးး ပလတ် ပလတ် ပြွတ် ပြွတ် အဖုတ် တပြင်လုံး ယက်လိုက် စောက်ပတ်နုတ်ခမ်းသားတွေ ဖြဲပီး အတွင်းကို လျှာ နဲ့ ထိုး ပေးလိုက် စောက်စိ ကို သာသာလေး ကိုက်လိုက် ဖြစ် ယက်ပေးနေမိတယ် ။ ဆယ်မိနစ် လောက် ယက်ပေးပီး ကျွန်တော် ထထိုင် လိုက်တယ် ပါးစပ်မှာ ပေနေတဲ့ သူ့ စောက်ရည်နဲ့ တံတွေး တွေ ကို ဘေးနားက ခုနက ချွတ်ထားတဲ့ သူ့ ထမိန် အပြာရောင်လေး ကို ဆွဲယူပီး သုတ်လိုက်တယ် ။
ဇင့် စောက်ပတ်က သိပ်မပြဲသေးဘူးနော် မှုတ်လို့ကောင်းတယ် ပြဲမလား ကိုရဲ ကလဲ မလုပ်ဖြစ်တာ ပဲကြာနေပီ ကို ဇင့် ယောက်ျား ကော အခု လို မှုတ်ပေးလား အင်း မှုတ်ပေးပါတယ် လာ ..အခု ဇင့် အလှည့် ကိုယ်လဲ အရမ်းခံချင်နေပီ ဇင့် နုတ်ခမ်း လှလှ လေး နဲ့ လွေပေးတော့ ချက်ချင်းပဲ ပက်လက်လှန်နေရာက နေ ထ လာပီး ကျွန်နော့် လီး ကို ကိုင်တယ် ။ ကျွန်နော် လည်း ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် လီး ကို လက်နဲ့ တစ်ချက်နှစ်ချက် ဂွင်းထုပေးပီး လီးပေါ် ကို တံတွေး ပျစ်ကနဲ ထွေးလိုက် တယ် ။ သူ့လက်ထဲမှာ ကျွန်နော့် လီး က သူ့တံတွေး နဲ့ ချောမွတ်လာတာ ကို ဂွင်းထု ပေးနေရင်း ကျွန်နော့် ကို တချက်ကြည့်တယ် ။ ပီးတော့ အောက်ကို ငုံလိုက်ပီး လွေတော့တာပဲ ။ ယောင်္ကျား နဲ့ ဘယ်လောက်တောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေခဲ့တယ် မသိ ။ အမှုတ် အရမ်းကောင်းတယ် ။ လီးဒစ်ကို လျှာ နဲ့ ရစ်ပတ်လိုက် ဥတွေကို ပွတ်လိုက် လီးထိပ်ကို နုတ်ခမ်းနဲ့ ပွတ်လိုက် တစ်ချောင်း လုံး ငုံ စုပ်လိုက်ဖြင့် သူ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအောက်မှာ ကျွန်နော် လူးလိမ့်နေတာပဲ။
အားးး ကောင်းလိုက်တာ ဇင်ရယ် ကျွမ်းကျင်လိုက်တာ ကိုယ့်မိန်းမ ထက်တောင် ကောင်းနေတယ် ` ဇင်ဇင့် ခေါင်း ကို ကိုင်ပီး လီး ကို အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေးနေလိုက်တယ် ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်အု…အု…အု လီးအရင်းမှ ထိပ်ဖျားထိ လျှာ အပြားလိုက် ယက်လိုက် ဥ တွေကို ငုံစုပ်လိုက်ဖြင့် အားရပါးရ ကျွမ်းကျင်စွာ စုပ်ပေးယက်ပေးနေတော့တယ် ။ အစက အဲ့လောက်တောင် ကျွမ်းကျင်မယ် မ ထင်ခဲ့ ။ မြန်မာဝတ်စုံလေး ဖြင့် သာ နေတတ်သူတစ်ယောက်မို့ ဒီဘက်ပိုင်း မှာ အဲ့လောက်တောင် ထန်မယ် မထင်ခဲ့ ။ အခု လို အိမ်ထောင်သည် တွေ ပီပီ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခံစားချိန်မှာတော့ ဇင်ဇင့်ရဲ့ အစွမ်းအစ က ကျွန်နော် တောင်လက်ဖျား ခါလောက် အောင် ကောင်းလွန်းလှနေတယ် ။ ဆယ်ငါးမိနစ်လောက် ကြာအောင် စုပ်ပေးပီး ကျွန်တော် တောင် ပီးချင်ချင် ဖြစ်သွားတယ်.. ဇင် ဇင် ကိုယ် လိုးချင်ပီကွာ ဆက်မှုတ်နေရင် ပီးသွားလိမ့်မယ်အင်းးး အသင့်ပါပဲ ကိုရဲ..ဇင် ဘယ်လိုနေပေးရမလဲဘေးတစောင်းလှဲ အိပ် လိုက်နော် အင်းး ဇင်ဇင်က ဘေးတစ်စောင်းလှဲ အိပ်ရင်း တင်ပါးကြီး ကို ကျွန်နော့် ဘက် ကော့ပေးလိုက်တယ်။ ဇင်ဇင့် ပေါင်တစ် ချောင်း ကို အသာလေး မ ရင်း ကျွန်နော့် လီးတံ ကို အဖုတ်ဝ မှာ တေ့လိုက်ပီး နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပွတ်ဆွဲ ပေးလိုက်တယ် ။
ကျွန်နော့် လက်တစ်ဘက်က ဇင်ဇင် ကိုယ်လုံးအောက်က နေလျှိုဝင်ပီး နို့သီး ကို ဖျစ်ညှစ်ပေးနေလိုက်တယ် ။ ကိုရဲ ..လိုးတော့ကွာ ..ဇင် မနေနိုင်တော့ဘူး ထည့်လိုက်တော့နော် အင်းးး ဒါဆို ထည့်ပီနော်ပလွတ်…အ..အ ပလွတ် ကနဲ မြည်သံ နှင့် အတူ ဇင်ဇင့် စောက်ဖုတ် ထဲကျွန်တော့ လီး တံ ဒစ်ဖျား မြုပ် ဝင်သွားတယ် ။ ဖြေးဖြေး ချင်း သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးနေပေမယ် ဘေး တစောင်း လိုးနေတာ မို့ လီး တစ်ချောင်းလုံး အဆုံးထိတော့ မဝင်ဘူး ။ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက်သာ ဝင်ထွက် လိုက်ဖြင့် စည်း ချက်ညီညီ လှုပ်ရှားနေမိတယ်။ ဇင်ဇင် တအီးအီး တအားးအားး ဖြင့် ညီးညူရင်း တင်ပါးကြီးတွေ ကို လည်း နောက်ဘက်ကို ပြန်ပြန် စောင့်ပေးနေတယ် ။ ဘွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်ဖတ် ဖတ်ဖတ်…အားးးအ..အ. အ. ကောင်းတယ် ကိုရဲ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ..အားးး “`အ င်းးးအင်းးးအားးး အု..ရော့ အားးး ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ..ဖတ် ဖတ် ဖတ် အားးး ..အားးး ဇင်.. ဖင်ကုန်းလိုက်ကွာ ဖင်ကုန်းပီး တက်ချ ချင်တယ် အင်း ကိုရဲ သဘော ကုန်းလိုက်မယ်နော် ဇင်ဇင် က ဖင်ကို ကုန်းပေးလိုက်တယ် ။ဇင်ဇင့် နောက်မှာ ဒူးထောက်ပီး အဖုတ်ဝ မှာ တေ့ပီး တင်ပါး နှစ်ခြမ်း ကို ကိုင်ကာ လီး စောင့်ထိုးသွင်းလိုက်တယ်
အားးးးထိတယ် အ အားးး အားး ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖုတ် ဖူတ် ဖုတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အားး ကိုရဲ ကောင်းလိုက်တာ လိုးပါ အားးး ဇင့်ကို လိုးပါ ဇင်ဇင့် တင်ပါး နဲ့ ကျွန်နော့် စည်းခုံ တို့ တဖတ် ဖတ် မြည်အောင် ရိုက်သံ တွေ ဆူညံအောင် ထွက်နေ တယ်။ ဖြောင်းးး အားးးးးးးးးးး နောက်ကို ကားတင်းထွက်နေတဲ့ တင်ပါးကြီး ကို ကျွန်နော် မချင့်မရဲ တစ်ချက်လက်ဝါးနဲ့ ခပ်ပြင်း ပြင်း ရိုက်လိုက်တယ် အားးး ကောင်းတယ် ကိုရဲ အားးးး ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အားးး ကောင်းလိုက်တာ ကိုရဲ မညှာ နဲ့ တော့ ဇင့်ကို လိုးပါ လက်တဘက် ဖြင့် ဇင်ဇင်က ကျွန်တော့ ဥ တွေကို ပေါင်ကြားမှ လှမ်းကိုင် ပွတ်ပေးနေတယ်။ ဖျန်းးးဖျန်းဖျ န်းးးး ဇင်ဇင် တင်ပါး ကို သုံးလေး ချက် ဆက်တိုက် ရိုက်ပစ်လိုက်တယ် လီးက လည်း အစောင့်မပျက် .. ဇင်ဇင် တစ်ယောက် အရမ်းကောင်းနေပီး သူ့တင်ပါး မှာ ကျွန်နော့် လက်ငါးချောင်းရာ အစင်းသားပေါ်လာတယ် ။ အသားဖြူတော့ တင်ပါးက ရဲစပ်လာ တယ်။
အချက်လေး ငါးဆယ်လောက် ဆက်တိုက်လိုးပစ်လိုက်ပီး ကျွန်နော့် လီးထိပ်က ကျဉ်တက်လာတယ် နောက်ဆုံး ဇင်ဇင့် စောက်ဖုတ် ထဲကို တဆုံး ထိုးသွင်း ပစ်လိုက်ပီး လီးရေတွေကို စောက်ဖုတ်ထဲ ကို ပန်းညှစ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ် .. `အားးးးးးး ပီးပီ…ဇင် အားးးးးးးးထွက်ကုန်ပီ အားးးး ညှစ်ထည့်ပေး အားးးးဇင်လည်းပီးပီ အားးးးးးကောင်းတယ် ကိုရဲအားးးးးး ဇင်ဇင် လေးဘက်ကုန်း နေရာကနေ အားပျော့ပီး ကုတင်ပေါ် မှောက်လျှက်ကျ သွားတယ် ကျွန်နော် လည်း အလိုက်သင့် ဇင်ဇင့် ကိုယ်ပေါ် မှောက်ချလိုက် ရင် လက်ကျန် သုတ်ရေ အနည်းငယ် ကို ထွက်သလောက် ပန်းထုတ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ ဇင် ´´ ဟင် ပြောလေ ´´ ကိုယ့်မိန်းမ ပြန်မလာခင်အထိ အခုလို နေချင်တယ်ကွာ ´´ အင်း ပါ ကိုရဲကလဲ ကိုရဲ စိတ်ကြိုက်ပါ ´´ ဒါပေမယ့် သက်မွန် ရှိနေသေးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ´´ အင်းးး ´´ ဇင်ဇင် ခပ်တွေတွေ လေး စဉ်းစားနေရင်း ကိုရဲ ´´ အင်း ပြောလေ ´´ ကိုရဲ သက်မွန်ကို စည်းရုံးကြည့်ပါလား ´´ ဟင် ဘယ်လို စည်းရုံးရမှာလဲ ´´ ဒီလိုလေ အခု ဇင် နဲ့ ကိုရဲ မှားပီးကြပီ အဲ့ဒီတော့ သက်မွန်သိသွားရင် မမ မိုး ကို ပြန်တိုင်နိုင်တယ် အဲ့ဒီတော့ သူ ပြန်မတိုင်နဲ့ အောင် သက်မွန် ကို လည်း စည်းရုံးမယ်လေ ´´ အင်းလေ … ဘယ်လို စည်းရုံးရ မှာလဲ သက်မွန်ကို ဖွင့်ပြောပီး ပြန်မတိုင်အောင် ပြောရမှာလား မလွယ်ဘူးထင်တယ် အကုန် ပြဿနာတွေ ရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ် ´´
အာ ကိုရဲ ကလည်း ဝေးပါ့ .. ဇင်နဲ့ ကိုရဲ မှားကြသလို သက်မွန်ကိုလည်း အမှားထဲ တိုးဝင်ခိုင်းလိုက်မှာပေါ့ ´´ ဟင် ဘယ်လို ဘယ်လို ´´ ကဲ ဒီလောက်တောင် ပြောရတာဝေးတယ် ကိုရဲ ကလဲ ညနေ သက်မွန် ပြန်လာရင် ဇင် အပြင်ထွက်ရှောင်ပေးမယ် ကို ရဲ ဘာသာ ဘယ်လို စည်းရုံးစည်းရုံး သိပီလား ´´ ဟာ ဒါဆို ကိုရဲ …က သက်မွန်ကို လဲ အခုလို ဇင်ဇင် နဲ့ နေသလို … အဲ့လိုလား ´´ ဘာလဲ မကြိုက်ဘူးလား ´´ ဟဲဟဲ ကြိုက်တာပေါ့ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပါ့မလား အဆင်ပြေပါ့မလား ´´ ဒါတော့ ကိုရဲ အစွမ်းအစပေါ့ ´´ ဇင်ဇင် က မျက်စောင်းလေး တစ်ချက် ပစ်လိုက်သေးတယ် ။ ကဲ ဒါဆိုလည်း စိတ်ချ ဇင့် အကြံ အတိုင်း အောင်မြင်စေရမယ် လောလောဆယ်တော့ နောက်တစ်ချီလောက် စွဲ ရင်ကောင်းမလား ´´ တော်ပီ ကိုရဲ ညနေ သက်မွန် အတွက် အားမွေးထားလိုက် တော့ ဇင်လည်း နာနေပီ ခန နားဦးမယ် ´´ … … ညနေ လေးနာရီလောက် သက်မွန်ပြန်လာတော့ ဇင်ဇင် က အပြင်သွားဦးမယ် ဆိုပီး ထွက်သွားတယ် ။ ကျွန်နော် နဲ့ သက်မွန် နှစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့ပီ ။ ဘယ်လို စရမလဲ စဉ်းစား ဆဲ ။ အတင်း ဝင်ကြမ်း လို့ လည်း မဖြစ် ။ ခယ်မလေး သက်မွန် ရေချိုးပီး အခန်းထဲမှာ အဝတ်အစား လဲ နေပုံ ရတယ် ။
ကျွန်နော် ဧည့်ခန်းထဲ မှာ ထိုင်နေ ရင်း စဉ်းစားဆဲ ဘယ်လို စည်းရုံးရရင် ကောင်းမလဲ အဖြေက မထွက် ၊ ဒါပေမယ့် ကံကြမ္မာက ကျွန်နော့် ဘက် အရေးပေးလာတယ် အခန်းထဲမှာ သက်မွန်ထွက်လာပီး ကျွန်နော့် ဘေးနားမှာ ဝင်ထိုင်ကာ ကိုကြီး ´ ဟင် ဘာလဲ သက်မွန် ´´ ရော့ ဒါကိုကြီး စွပ်ကျယ် မ လား ´´ အင်းးး ဟုတ်တယ် သက်မွန် ဘာလို့လဲ ´ မချိုမချဉ် မျက်နှာပေး ဖြင့် သက်မွန်က ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး သက်မွန်နဲ့ မမဇင် အိပ်တဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ တွေ့လို့ ကိုကြီး များ မေ့ကျန်ခဲ့တာလားလို့ ´´ အော် …အင်းးး ဟိုလေ ..ဟို …´´ ကျွန်နော် အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့ ဖြင့် ဘာပြောရမှန်းမသိ ဘာတွေ တဟိုဟို ဖြစ်နေတာလဲ ကိုကြီး မှန်မှန်ပြော ဒီနေ့ တနေ့လုံး မမဇင် နဲ့ ကိုကြီး ၂ ယောက် တည်း ကျန်ခဲ့တာ အမှန်အတိုင်းပြော မညာနဲ့´´ အင်းးး သက်မွန် …ကိုကြီး မညာချင်ဘူး အဲ့တော့ ဘယ်လို ပြောရမလဲ ဆိုတော့ ကို ကြီး နဲ့ဇင်ဇင် ….´´ ခရီးဆုံး ရောက်သွားတယ် ဆိုပါတော့ ´´ အင်း ဟုတ် ..ဟုတ်တယ် သက်မွန် ´´ လုပ်တုန်းက လုပ်ပီး ဘာ ကြောက်နေတာလဲ ကိုကြီး ဟွမ်း ´´ ဟိုလေ ..ဟို …´´ ကဲ ကိုကြီး ..တဟိုဟို ဖြစ်မနေနဲ့ မမဇင်က ခုန က အပြင်မထွက်ခင် မှာ သွားတယ် နေ့လည်က မမဇင် နဲ့ ကိုကြီး တူတူ အိပ်ပီး ကျန်ခဲ့တဲ့ စွပ်ကျယ်လေး ပေးလိုက်ပါတဲ့ အပြင်ခန သွားပီး ပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းအိမ် ခန သွားပီး ပြန်လာလိမ့်မယ် အပြန်ဆေးလည်း ဝင်ဝယ်ခဲ့မယ်တဲ့ ´´
ဘာဆေးလဲ ´´ အော် ကိုကြီးကလဲ တား ဆေးပေါ့လို့ တော်ကြာ မမဇင် နဲ့သက်မွန် ဘိုက်ကြီး ကုန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ´´ ဟင် ..မမဇင် နဲ့ သက်မွန် ဟုတ်လား ´´ ဘာလဲ မမဇင် တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ အချစ်တွေပေးမှာလား သက်မွန်ကိုကျတော့ မပေးတော့ဘူးလား ´´ ဟင် ..သက်မွန်က ကိုကြီး နဲ့ ဇင်ဇင် ဖြစ်တာ ကို သိပီးပီပေါ့ ဟုတ်လား ´´ ဒါပေါ့ … ခုနက မမဇင် အကုန်ပြောသွားပီးပီ ..အခု သက်မွန်နဲ့ကိုကြီး ကို ဘာလို့ ၂ ယောက်ထဲ ထားခဲ့တာ ဆိုတာ ကော သက်မွန်ပြောပြရဦးမှာလား ´´ ပြောစရာ မလိုတော့ပါဘူး သက်မွန်ရယ် …´´ ကျွန်နော် သက် မွန် ခါးလေး ကိုအသာ လှမ်းဖက်လိုက်တယ် ။ ပိန်သွယ်သွယ် ကိုယ်လုံးလေး အလိုက်သင့် ပါလာတယ် ထို့နောက် နုတ်ခမ်းလေး ကို အသာ ငုံစုပ်လိုက်တော့တယ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ သက်မွန် ရဲ့ အနမ်းတွေက ဇင်ဇင် ထက်တောင် သာသေးတယ် ။ ကျွမ်းကျင်လှ တယ် ။ ပါးစပ်ထဲမှာ လျှာချင်း လိမ်လိုက် စုပ်လိုက် လုပ်ပေးနေတာ တကယ့် ဆရာမကြီး အလား ၊။ သက်မွန် ရဲ့ နို့ အုံ ကို အကျီ ပေါ် ကနေ ကိုင်လိုက်တယ် ။ သေးလွန်းလှတယ် ။ ဟိတ် .. ကိုကြီး ဧည့်ခန်းကြီးမှာနော် လူတွေ မြင်ကုန်မယ် ´´ အင်း လာ အိပ်ခန်းထဲ ကို ကိုကြီး ပွေ့ချီသွားမယ် ´´ ကိုယ်လုံးသေးသေး လေး အား အသာ မ ကာ အခန်းထဲ ကို ခေါ်ဆောင် ခဲ့လိုက်တော့တယ် ။ …. …
အခန်းထဲ ရောက်တာ နဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ သက်မွန်ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ် ။ ဖင်ကုန်းထားတဲ့ သက်မွန့် ဂါဝန် ကို အပေါ်ထိ ဆွဲ လှန်လိုက်တော့ အောက်မှာ ပင်တီ အဝါနုရောင်လေး အလယ်မှာ နဲနဲ တောင် စိုနေပီ ။ ပင်တီပေါ်ကနေ အသာဆွဲပွတ်လိုက်တော့ သက်မွန် ခါးလေး တွန့်သွားပီး ညည်းညူသံလေး ပေးလာတယ် အားးးရှီးးးး ´´ သက်မွန် ခံချင်နေပီလား ´´ အင်း ကိုရဲ လုပ်ပေးတော့ ´´ ပင်တီ ကို မချွတ်တော့ ပဲ ဘေးသို့ အသာဆွဲဖယ်လိုက်တယ် ။ တင်ပါးက သေးသေး မို့ အဖုတ်လည်း သေးမယ်ထင်ထားတာ အဖုတ်က တော်တော် ပြဲပြဲ ရီးစား နဲ့ ဘယ်လောက်တောင် လိုးထားလဲမသိ ။ ကျွန်နော် လည်း အဖုတ် ဝမှာ လီးတံ ကို သွင်းပီး ဒစ် ကို ထိုးမြုပ်လိုက်တယ် ။ ဘယ်အချိန်ထဲက ခံချင်နေသည်မသိ စောက်ရည်တွေ ရွဲနေတာမို့ လီးက အဖုတ်ထဲပလွတ်´´ ကနဲ အသံမြည်ကာ ဝင်သွားတော့တယ် အားးး ကိုရဲ ဝင်သွားပီ အားးး ကောင်းလိုက်တာ ´´ သက်မွန်ကို ကိုယ်လိုးနေပီ သက်မွန် ´´ အင်းးး လိုးလိုး ´´ အားးး ငါ့ခယ်မလေး ကို လိုးနေပီကွာ ´´ ဟုတ်တယ် ကိုရဲ လိုးး သက်မွန်ကို ကိုရဲ လိုးနေပီ ´´ နောက်ကနေ အားရပါးရ စောင့်လိုး ပစ်လိုက်တယ် ။ အခန်းထဲမှာ လိုးသံတွေ ဆူညံထွက်လာတယ် ။ သက်မွန်ကလည်း တအားအား ဖြင့်အော်နေ တော့တယ် ။ လိုးနေရင်း နဲ့ ပင်တီ စ ကို လက်တဘက်က ကိုင်ထားတာ မို့ အားမရတာ နဲ့ ကျွန်နော်လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ပင်တီကို ဆွဲ ဖြဲ ပစ်လိုက်တယ် ဗျိ..ဗျိ ´´
ပင်တီဘောင်းဘီ အကုန်ပြဲထွက်သွားတာ နဲ့ အောက်ကို ဆွဲချလိုက်ပီး ခါးကို ကိုင်ကာ ဆက်စောင့်ပစ်လိုက်တယ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ အားး အားး အားး ဟူတ်တယ်ကိုရဲ ထိတယ် အင်းးးစောင့်လိုးပေး အားးး´´ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ နောက်ကနေ စောင့်နေရ တာ ညောင်းလာပီမို့ သက်မွန် ထ ကိုယ့် ပေါ် တက်ခွပီး အပေါ် က စောင့်ပေး ´´ အင်းးး ကိုရဲ ´´ သက်မွန်က ကုန်းနေရာမှ ထကာ ကျွန်နော်က ပက်လက်လှန်လိုက်ပီး အပေါ် မှ တက်စောင့်တော့တယ် ။ တက်စောင့်နေရင်း နဲ့ ဂါဝန်ကို ခေါင်းမှ ဆွဲ ချွတ်ပစ်လိုက် တယ် အားး ခံလို့ ကောင်းတယ် ကိုရဲ ရယ် သက်မွန် ကိုရဲ နဲ့ ခံချင်နေတာ ကြာပီ မမ နဲ့ ကိုရဲ လိုးနေသံတွေ ကြားတိုင်း စောက်ဖုတ်ထဲ က တအား ယားတာပဲ ´´ အင်းးး သက်မွန် အားရပါးရစောင့် အားးး ကောင်းတယ် ´´ အင်းးး သက်မွန် နဲ့ မမဇင် ကိုရဲ တို့ လင်မ ယားလိုးနေသံ တွေကြားတိုင်း အလိုးခံချင်လွန်းလို့ တစ်ယောက်အဖုတ် တစ်ယောက်ပွတ်နေကြတာ ကြာပီ အခုမှ တကယ် ခံပေးရ တော့တယ် အားး ´´ သက်မွန်က အပေါ်မှ စောင့်နေရင်း စကားတွေ လည်း တတွတ်တွတ်ပြောနေသေးတယ် ။ ဒီလိုမှန်း သိ အရင် ကတည်းက ခယ်မလေး ကို လိုးပါတယ်ဗျာ ။
ကျွန်နော် အောက်ကနေ ပက်လက်လှန်ပေးထားရာမှ သက်မွန်နို့တွေကို ပါ လှမ်းကိုင်ပီး နယ်ပေးနေမိတယ် ။ သက်မွန် နို့က ဇင်ဇင် နို့တွေလောက်တော့ ကိုင်လို့ မကောင်း ။ သေးနေတယ်။ နို့ကို ကိုင်နေတဲ့ ကျွန်နော့် လက်တွေ ကို သက်မွန် က လှမ်းယူက ပါးစပ်ထဲ ထည့်ကာ တပြွတ်ပြွတ် စုပ်လိုက်သေးတယ်။ အားး သက်မွန်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ စောင့်ပေး အားးးရှီးးး´´ အားးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ သက်မွန် ခန အောက်ဆင်းဦး လီးစုပ်ပေးဦးကွာ ´´ အင်းး ကိုရဲ …´´ သက်မွန်က အပေါ်က နေ စောင့်ပေးနေရာမှာ ဘေး မှာ ခပ်ကုန်းကုန်းလေး ဆင်းလိုက်ကာ လီးတံကို စစုပ်တော့တယ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ အားးး သက်မွန်က လူသာသေးတယ် အမှုတ်အစုပ် အရမ်းကျွမ်းကျင်တယ် အားးး သက်မွန် ကောင်းလိုက်တာ သက်မွန် စုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ´´ လီးပေါ် တံတွေး ထွေးချလိုက် ပြန်စုပ်လိုက် ဖြင့် သက်မွန်ရဲ့ စုပ်ချက်တွေက မြန်ဆန်လွန်းတယ် အားးးအားး သက်မွန် အားးးကောင်း တယ် ´´ ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ ပက်လက်လှန်ရင်းမှာ ခေါင်းကို အသာထောင်ကာ သက်မွန်စက်ပတ် ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တယ် ။ အဖုတ်မှာ အရည်တွေ စိုရွဲ နေပီး ပြဲအာအာ လေး ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်နော် ကသာ အခုမှ သက်မွန်ကို လိုးရတာ ဘယ်သူတွေ က ဘယ်လောက်တောင် လိုးထားပီးပြီ လဲမသိ ။
ကိုယ့်ခယ်မလေးမို့ လိုးချင်နေပေမယ့် သိက္ခာ ထိန်းနေရတာ အခုတော့ သက်မွန်က ကိုယ့်ထက်ပင် ပိုတဲ့ ဆန္ဒတွေ နဲ့ လုပ်ပေးနေ တယ်။ သက်မွန် စက်ပတ် ထဲကို လက်ညိုးနဲ့လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းပူးပီး ထိုးထည့်ပေးလိုက်တယ် အားး ´´ ပြွတ်ပြွတ် ပြွတ် ´´ ဇွတ် ဇွတ် ဇွပ် ..ဇွပ် ´´ ကျွန်နော့် စိတ်တွေ ထိန်းထားလို့ မရနိုင်တော့ နေ့လည် က လည်း ဇင်ဇင် နဲ့ အပီ လိုးထားတာမို့ အကြာကြီး မထိန်းနိုင်တော့ပဲ စုပ်ပေးနေတဲ့ သက်မွန်ပါးစပ်ထဲ ကို လီးရေတွေ ပန်းထည့်ပစ်လိုက်တယ် အားးး အားးးထွက်ပီ ညီမလေး အားး သက်မွန် အားးး´´ လရေ တွေ ပန်းထွက်လာပေမယ် သက်မွန်က ပါးစပ်ထဲမှ လီး ကို မချွတ်ပစ်ပဲ ဆက်တိုက် ဆက်စုပ်ပေးကာ ကျွန်နော့် လီးရေတွေကို ပါ ယက်ပစ်လိုက်တော့တယ် ။ အားးးကောင်းလိုက်တာ ကိုရဲ´´ အင်းးး ကောင်းတယ် သက်မွန်စုပ်ပေး တာ အရမ်း ကောင်းလွန်းလို့ ထွက်ကုန်တယ် ´´ အင်း ကိုရဲ ခနနားလိုက်ဦးနော် သက်မွန်ရေသွားဆေးလိုက်ဦးမယ် ´´ ဆိုပီး ကု တင်ပေါ်မှ ဆင်းသွားတယ် ။ သက်မွန် နဲ့ ဇင်ဇင် အိပ်တဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာပဲ ကျွန်နော် မှိန်းနေရင်း အိပ်ပျော်သွားတော့တယ် အိပ်ယာက နိုးတော့ အပြင်ဘက်မှာ မှောင်နေပီ။ လက်က နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ည ၈ နာရီတောင်ထိုးနေပီ ။
ဧည့်ခန်းဘက်က စကားသံ သဲ့သဲ့ ကြားနေရသည်မို့ ဇင်ဇင် ပြန်ရောက်နေပီဆိုတာ သိလိုက်တယ် ။ အိပ်ယာထဲက ထကာ အပြင် မထွက်သေးပဲ ရေချိုးခန်းဝင် ကာ ရေချိုးလိုက်တော့ လူက လန်းဆန်းသွားတယ် ။ တရေးတမော အိပ်ထားသည်မို့ အားတွေလည်း ရှိနေသလို ဖြစ်ကာ ရေချိုးရင်း ငပဲက ထောင်မတ်နေတော့တယ် ။ ဆပ်ပြာဖြင့် အသာအယာ ပွတ်သပ်တိုက်ဆေးကာ ရေတဝြကီး ချိုးပီး အဝတ်အစားလဲကာ ဧည့်ခန်းဘက်ထွက်လာလိုက်တယ်။ ကိုကြီး နိုးပီလား ဧည့်ခန်းထဲမှာ ခြေသည်းထိုင်ဆိုးနေသော ခယ်မလေး သက်မွန်က လှမ်း မေးတယ် ။ ညာဘက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ထမင်းစားခန်းမှာ ဇင်ဇင်က အစားအသောက်တွေပြင်ဆင်နေတယ် ကိုကြီး အားရှိသွား အောင်လို့ တမင် မနှိုးပဲ ထားထားတာ အင်းး…အားကတော့ တအားရှိနေပီ သက်မွန်ရေ .. ရေချိုးလိုက်တော့ ပိုလန်းသွားတယ် ကဲ ပို အားရှိသွားအောင် ညစာအသင့်ပြင်ထားပီ ယောင်္ကျားရေ.. ဇင်ဇင်က အရွှန်းအဖောက်စကားလေး ဖြင့် ထမင်းစားခန်းကနေ လှမ်းပြောတော့ သက်မွန်က ဟင်းးးး မမဇင်နော် သူ့ယောင်္ကျားလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ တို့ကိုကြီးကိုများ ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ဟိဟိ .. မနက်က ငါ့ ယောင်္ကျားဖြစ်သွားပီလေ ဟွမ်း ..မမဇင် တစ်ယောက်တည်း ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော် သက်မွန်လည်း ဆိုင်ပါတယ်နော် အမ လေ..သူတို့နှစ်ယောက်က ဝေစုခွဲနေကြသေးတယ် ။
ခြေသည်းဆိုးတာလက်စသတ်ရင်း သက်မွန်က ကျွန်နော့် လက်မောင်းလေး ကို လာဆွဲကာ ထမင်းစားခန်းထဲ အတူတူဝင်လာလိုက်သည် ။ ကျွန်နော် လည်း အလိုက်တသင့် သက်မွန် ခါးလေးကို ဖက်ထားလိုက် တယ် ။ သုံးယောက်သား ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြင့် ညစာ စားလိုက်ကြတယ် ကျွန်နော့် အတွက် အေဘီစီ ပုလင်း တစ်လုံး နဲ့ သူတို့က စ ပိုင် တစ်ယောက်တစ်လုံးစီသောက်လိုက်ကြသေးတယ် ။ သက်မွန်က ကိုကြီး ..ဒီည ဘယ်မိန်းမ နဲ့ အိပ်မှာလဲ ပြောနှစ်ယောက်လုံး နဲ့ အတူတူ အိပ်မှာပေါ့ ဆိုတော့ သုံးယောက်သား သဘောကျရင်း ရယ်မိလိုက်တယ် အားလုံး စားသောက်ပီးသွားတော့ ဇင်ဇင်က ရော့ ကိုကြီး သောက်လိုက်ဦး ဆိုပီး တော့ပ်ရိုး နှစ်လုံးပေးတယ် ဟ… နှစ်လုံးကြီးတောင်ပါလား အင်းလေ .. နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ အိပ် မှာဆိုတော့ နှစ်လုံးသောက်ရမှာပေါ့ ရော့ သက်မွန် ဒါက နင်နဲ့ငါ တစ်ယောက်တစ်လုံး ဆိုပီး ဆေးလုံးသေးသေး လေး တစ်လုံးစီ သောက်လိုက်ကြတယ် ။ တားဆေးပဲ ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုတာ မမေးပဲ သိလိုက်တယ် ။ သိပ်မကြာခင်မှာ ပဲ ကျွန်နော် တို့ သုံး ယောက်လုံး အိပ်ခန်းတွင်းကို ရောက်လို့ လာတော့တယ် ။ ဒီတစ်ခါတော့ နေ့လည်က အိပ်ခဲ့တဲ့ သူတို့ အိပ်ခန်းထဲကို မဟုတ်တော့ပဲ ကျွန်နော် နဲ့ ကျွန်နော့် မိန်းမ အကြိမ်ကြိမ် အိပ်စက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်နော့် တို့ လင်မယား အိပ်ယာကြီး ထက်ကိုပေါ့ ။
အိမ်ခန်းထဲ ရောက် တယ် ဆိုရင်ပဲ ဇင်ဇင် နဲ့ သက်မွန်က အဝတ်တွေ အကုန်ချွတ်ပစ်လိုက်ကြတော့တယ် ။ အဝတ်တွေ တစ်ခုချင်းစီ ချွတ်နေကြပုံကို ကုတင်ပေါ်မှ အရသာခံကာ ကြည့်နေရင်း ကျွန်နော့် ငပဲကလည်း အစွမ်းကုန်မာန်ဖီနေပီ ။ ကျွန်နော်လည်း ပုဆိုး အကျီတွေ ချွတ် ပစ်လိုက်တော့တယ် ။ အဝတ်တွေ ချွတ်ပီး ကြည့်လိုက်တော့ ဇင်ဇင်နဲ့သက်မွန်က ကုတင်အောက်မှာပဲ မတ်တပ်ရပ်ရင်း တစ် ယောက်နို့ တစ်ယောက် ပွတ်ကာ ကိုယ်လုံးတီး ကိုယ်စီဖြင့် နုတ်ခမ်းတွေ ကစ်ဆင် ပေးနေကြသည် ။ ကျွန်နော်လည်း ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းကာ သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ကိုယ်လုံးတွေကို ဖက်လိုက်ကာ သုံးယောက်သား ကစ်ဆင်ပေးလိုက်တယ် တစ်ယောက်တလဲ ကစ်ဆစ် ပေးနေတုန်း ဇင်ဇင်က ကျွန်နော့် လီးတံကို ကိုင်ကာ ပွတ်နေတုန်း သက်မွန်ကလည်း ကျွန်နော့် ဥလေးတွေကို ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေတော့တယ် ။ ကျွန်နော့် လီးချောင်းကြီးမှာလည်း ဆေးစွမ်းကြောင့်ကော ဘီယာရှိန်ကြောင့်ပါ မာန်ထကာ ထောင်မတ်နေ ပီ ။
ငါးမိနစ်လောက် ကစ်ဆင်ပေးပီးသွားချိန်မှာ ဇင်ဇင်နဲ့သက်မွန် နှစ်ယောက်သား ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကြကာ ကျွန်နော့် လီးတံကို နှစ်ယောက်သာ တစ်လှည့်စီ စုပ်ကြတော့တယ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အားးး အာ…အားးးးး လီးတစ်ချောင်းတည်းအား ဇင်ဇင်နဲ့ သက်မွန် နုတ်ခမ်း တစ်ဘက်တစ်ချက်စီဖြင့် ပွတ်ဆွဲလိုက်တိုင်း ကြက်သီးများပင်ထလာအောင် ကောင်းနေတော့တယ် ။ ဇင်ဇင် က ကျွန်နော့် လီးတံ ကို ကိုင်စွဲလိုက်ကာ သက်မွန် နုတ်ခမ်းထဲကို ထိုးထည့်ပေးလိုက်တော့ သက်မွန်က နုတ်ခမ်းလေး အသာဟကာ ငုံစွဲ လိုက်တော့တယ် အားးး ကောင်းလိုက်တာ အားးး ဇင်ဇင်က ငြီးငြူနေတဲ့ ကျွန်နော့် ကို မော့ကြည့်လိုက်ကာ ခပ်ပြုံးပြုံးလေး ဖြင့် လျှာလေး တစ်ချက်သပ်လိုက်ရင်း အရမ်းကောင်းနေလား ယောင်္ကျား သက်မွန်က အစုပ် မပြတ် အင်းးးး ကောင်းတယ် မိန်းမ အရမ်းကောင်းတယ် အားးး ရှီးးးး မိန်းမ နှစ်ယောက်က ကျွန်နော့် လီးကို အငမ်းမရ စုပ်နေကြတယ် ။
စုပ်နေကြတဲ့ မိန်းမ နှစ် ယောက်ကလဲ တစ်ယောက်က ခယ်မလေး တစ်ယောက်က ယောက်ဖ ရဲ့ မိန်းမ ဆိုတော့ ကျွန်နော့် လီး ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းနေမလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဗျာ .. ဆယ်ငါးမိနစ်လောက်ကြာအောင် လီးစုပ်တာ ခံပီးနောက် ကျွန်နော်က ကု တင်ပေါ်တက်လိုက်ကာ ပက်လက်လှန်လိုက်တော့ နှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ် တက်လိုက်လာပီး ဇင်ဇင်က အောက်ပိုင်းမှာ ကျူံ့ ကျူံ့လေး ထိုင်ကာ လီးစုပ်တော့တယ် ။ သက်မွန်ကတော့ ကျွန်နော့် မျက်နှာပေါ် တက်ခွကာ သူ့အဖုတ်ကြီးကို ကျွန်နော့် ပါးစပ်ပေါ် တေ့ပေးလိုက်တယ် ။ အောက်ပိုင်းက လီးစုပ်တာ ခံရင်း သက်မွန်စက်ပတ်ကို ဖြဲကာ ယက်ပေးလိုက်တော့တယ် ။ သက်မွန်အဖုတ် ထဲမှ အရည်တွေ လည်း အရမ်းရွဲစိုကာ ထွက်နေပီ ။
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အားးး ကောင်းတယ် ကိုကြီး အားးး ယက်ပေး အစိကို စုပ်ပေး အားးးရှီးးးးပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အားးးး ရှီးးး ခနနေတော့ လီးစုပ်နေတဲ့ ဇင်ဇင်က ကျွန်နော့် လီးပေါ် တက်ခွကာ အဖုတ်ဝမှာ တေ့ လိုက်ပီး ထိုင်ချကာ တက်စောင့်ပါတော့တယ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အင့် အင့် အင့် အင့် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အားးး အားးးအားး ရှီးးးအားးး အမလေးးးအားးးကောင်းလိုက်တာ ယောင်္ကျား အားးး ကျွန်နော့် မျက်နှာမှာလဲ သက်မွန် ရဲ့ စောက်ရည်တွေ ရွှဲနေပီ သက် မွန်ရဲ့ စောက်စိကို ဆွဲဆွဲ စုပ်ရင်း နဲ့ သက်မွန် စအိုလေးကို ပါ လက်ခလယ်လေး ဖြင့် ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ကာ ကလိပေးလိုက်တော့ သက်မွန်တစ်ယောက် ဖင်ကြီး ကော့ကော့ သွားကာ အားးး အားး ကောင်းတယ်ကိုကြီး အားးး အမလေးးး ဖင်ဝလေးကို လျှာထိပ်လေး နဲ့ စွဲပေးလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ သက်မွန်တစ်ယောက် ကုတင်ဘောင်ကို လက်လှမ်းထောက်ကာ တင်ပါးကြီး ကော့ ကော့သွားကာ ဖျက်ဖျက်လူး ဖြစ်သွားတော့တယ် ။ အောက်မှ ဇင်ဇင် ရဲ့ စောင့်ချက်တွေကလည်း ပိုပိုပြင်းထန်လာတယ် ။
အားးး ကောင်းတယ် အားးဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အားးး ရှီးးးးးအားးးအားးး ကိုကြီး သက်မွန်ကို တလှည့် လိုးပေးဦး မနေနိုင်တော့ဘူး အင်းးး သက်မွန် ဖင်ကုန်းလိုက်နော် သက်မွန်တစ်ယောက် ကျွန်နော့် မျက်နှာပေါ် တက်ခွနေရာမှ အောက်ကို ဆင်းလိုက်ပီး ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်ကာ လေးဘက်ကုန်းလိုက်သည် ။ ဇင်ဇင်ကလည်း အလိုက်တသိ အပေါ်မှ တက်ခွစောင့်နေရာမှ ဆင်းလိုက်တယ် ဘလွတ် အသံနဲ့အတူ ဇင်ဇင့် စောက်ဖုတ်ထဲမှလီးတံကြီး ကျွတ်ထွတ်သွားသည် ။ လီးတံကို ငုံကြည့်လိုက်တော့ လီးတံတလျောက်မှာကော ဥတွေမှာပါ ဇင်ဇင့်စောက်ရည်တွေ ရွဲနေတယ် ။ လီးတံမှ စောက်ရည်တွေကို သက်မွန် ရဲ့ ဖင်ဝမှာ သုတ်လိမ်းပေးလိုက်ရင်း စအိုဝ လေးကို ဒစ်ဖျားလေး နဲ့ ဖိကာဖိကာ ပွတ်ပေးလိုက်တယ် သက်မွန် ..ကိုကြီး သက်မွန် ဖင်ကို လိုးမယ်နော် ဆိုတော့ အင်းး…ကိုကြီး ကြိုက်သလိုလုပ်ကွာ ဆိုပီး ဖင်လေး ကော့ပေးတော့တယ် ။
ခယ်မလေး ကို ဖင်လိုးရတော့ မယ် ဆိုတဲ့ အသိကြောင့် လီးဒစ်ကြီး တောင် ပိုကားလာသလို ခံစားလိုက်ရတယ် ဇင်ဇင် ..သက်မွန် ဖင်ကို နဲနဲ ဖြဲထားလိုက်ကွာ ဟုတ် .. ယောင်္ကျား ပီးရင် ဇင့်ကို လည်း ဖင်လိုးပေးနော် `ဟားးးး ရတယ် ဒီည ငါ့မိန်းမ အသစ်ကလေး နှစ်ယောက်လုံးကို ဖင်ကော အဖုတ်ကော ပါးစပ်ကော အကုန် လိုးပေးမယ် စိတ်ချ ဇင်ဇင်က သက်မွန်တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကို ဆွဲဖြဲလိုက်တယ် ။ စအိုညိုတိုတိုလေး ပွစိပွစိ ဖြင့် နဲနဲ ဟသွားတာ နဲ့ လီး ဒစ်ကို ဖြေးဖြေးချင်း ထိုးသွင်းပေးလိုက်တယ်
အားးး ကိုကြီး အားးး နာတယ် အင်း အင်း ကိုကြီး ဖြည်းဖြည့်သွင်းပေးမယ်နော် ဗျစ် ..ဗျစ်.. အားး လီးဒစ်ဝင်သွားပီ အားး လေ ဘက်ကုန်းထားရင်း သက်မွန်တစ်ယောက် အိပ်ယာခင်းစတွေကို လက်နဲ့ ကျစ်ကျစ် ပါအောင် စုပ်ကိုင်ထားမိတယ် ဖင်ဝမှာ တစ်စို့စို့ ကြီး ဖြစ်နေတယ် ဖြေးဖြေးချင်းဝင်သွားသော လီးတံတလျောက် ဖင်စအို ဘေးသားလေးတွေပါ ကပ်ပါသွားတယ် ။ အားးး အားးး သက်မွန် အကုန်ဝင်တော့မယ် ဆက်သွင်းမယ်နော် အင်းး လုပ် အားးး တဖြည်းဖြည်း လီးတံက သက်မွန် စအိုထဲသို့ တစ်ချောင်း လုံးဝင်သွားတော့တယ် ဇင်ဇင် သက်မွန်ဖင်ဝပေါ် တံတွေး ထွေးပေးလိုက် အသွင်း အထုတ် လုပ်တော့မယ် အင်း အင်း.. ပျစ် .. ဇင်ဇင်က လီးဝင်နေတဲက သက်မွန် စအိုပေါ်ကို တံတွေး ထွေးချလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော်လည်း သက်မွန် ခါးသိမ်သိမ်လေးကို ကိုင် ကာ ဖြေးဖြေးချင် လီးတံကို ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက် ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်သွင်းလိုက်ဖြင့် တော်တော်ကြာနေတော့ အဆင်ချောလာတယ် တဖြည်းဖြည်း အရှိန်မြှင့်ကာ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေချိန် ဇင်ဇင်က သက်မွန်ပေါင်ကြားထဲလက်ထည့်ကာ စောက်ဖုတ်ကို ကလိပေး နေတော့တယ်။
သက်မွန်တစ်ယောက် ဖင်လိုးခံရင်း အဖုတ်ကလိပေးခံနေရတာကြောင့် ကာမစိတ်တွေ ပိုပို ဖြစ်လာကာ သူမ ဖင်ကြီးကို ပိုကော့ ကော့ပေးနေမိတယ် အင်းးး အင့် အားးး ရှီးးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အားးး ကိုကြီး ကောင်းလိုက်တာ လိုး အားးးစောင့်လိုးပေး ခံလို့ ကောင်းနေပီ အင့် အင် အင့် ရော့ ရော့ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အားးး အမလေးးအားးးကောင်းလိုက်တာ သက်မွန်ဖင်က စီးကြပ်နေ တာပဲ အားးး သက်မွန်လည်း ဖင်သားတွေက လီးတံကို ပြန်ပြန်ညှစ်ပေးနေမိတယ် အားးးအားးး ဘွတ် ဘွတ် ဇွပ် အားးး အားးး အားးအားးး သက်မွန် ဖင်ကို ကိုကြီး လိုးနေပီ အားးကောင်းလိုက်တာ အားးး အင်းးကိုကြီး လိုးပါ အားးးသက်မွန် ဖင်ခံပေးနေ တယ် အားးး အမေ့ အားးး ဆက်တိုင် စောင့်လိုးနေတာကြောင့် ဖင်ဝမှာ ပိုကျယ်လာကာ အဆင်ချောလာချိန် ယောင်္ကျား ဇင့်ကို လည်း ဖင်လိုးပေးဦးလေ ဆိုကာ သက်မွန်ဘေးနားမှာ ဇင်ဇင်က ဖင်လာကုန်းတယ်
အင်းး လာခဲ့ ငါ့မိန်းမ အသစ်လေး နှစ်ယောက်လုံး ဖင်တလှည့်စီ ချပေးမယ် ဟု ဆိုကာ ဇင်ဇင့် ဖင်ဝကိုလီးတံ တေ့ပီး ထိုးသွင်း လိုက်တော့တယ် အားးး ယောင်္ကျားးအားးအို…ကြပ်တယ် အားးးအမလေးးးးအားးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အားးး အသစ်စက်စက် စအို နှစ်ပေါက်ကို ချနေရတာကြောင့် လီးတံတောင် ကျိန်းစပ်လာတယ် ။ ဇင်ဇင့် ဖင်ကို လိုးနေရင်း သက်မွန် စောက်ဖုတ်ကို လက်တစ်ဘက်ဖြင့် ကလိပေးနေလိုက်တယ် ။ အခန်းထဲမှာ လိုးသံတွေ အော်သံတွေ ဆူညံနေတော့တယ် ။ အားးး ကောင်းတယ် အားးရှီးးး ဘွတ် ဘွတ် ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အားးး ယောင်္ကျား အားးး အမလေးးးအားးး လိုးပါ ဖင် ကွဲချင်ကွဲပါစေ လိုးပါ အားးစောင့် စောင့် သက်မွန် စောက်ဖုတ်ကို ကလိနေရင်း ညလက်ဖြင့် ဇင်ဇင့် တင်ပါးကြီး ကို ခပ်ဆက်ဆက် ဖြောင်းခနဲ တစ်ချက်ရိုက်ပစ်လိက်တယ် တင်ပါးကြီးတဲ့ ဇင်ဇင်ရဲ့ တင်းပါး ကြီး မှာ ရဲခနဲ လက်ရာကြီး ထင်သွားပီး တင်း ပါးသားတွေ တုန်ခါသွားတယ်
အားးးး ကောင်းတယ် ရိုက်ပါ အားးး ဇင့်ဖင်ကို ချ အားးး ဖြောင်း ဖောင်း ဖြောင်းးး အားးး ဘေးမှ သက်မွန် တင်ပါး ခပ်သေးသေးကို ပါ တစ်ချက် ရိုက်ပစ်လိုက်တယ် ဖြောင်းးးးးး အားးး ကိုကြီး အားးး သက်မွန် ထဲ ထည့်ပေးဦး ဟု ဆိုလာသဖြင့် ဇင်ဇင့် ဖင်ထဲမှ လီးတံကို ချွတ်လိုက်ကာ သက်မွန် စောက်ဖုတ် ထဲ ထည့်လိုးလိုက်ပြန်တယ် အားးး ကောင်းလိုက် တာ အားးး လိုးလိုး အားးး ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အမလေးး သက်မွန် ရယ် ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ် အားးး အားးး စောင့်ပါ ကိုကြီး လိုးလိုး တအားစောင့် အားးးကောင်းတယ် အင့် အင့် ရော့ ရော့ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အားးး ငါလိုးမ ခယ်မလေး စောက်ဖုတ် အားးးအင့် အင့် အင့် အားးးလိုးပါ ကိုကြီး စိတ်ကြိုက်လိုး သက်မွန် ကိုကြီး လီးနဲ့ ခံချင်နေတာကြာပီ အားးးလိုး အားးး အားးးကောင်းတယ် လာဇင်ဇင် သက်မွန် နဲ့ အောက်ကို ဝင်ပီး ထပ်ထားလိုက် အတူတူ လိုးပေးမယ် ဇင်ဇင်လည်း သက်မွန် အောက်ကို တိုးဝင်လာပီး အဖုတ်ချင်းထပ်ထားလိုက်တာမို့ သက်မွန်ကို တလှည့် ဇင်ဇင့်ကို တလှည့် အဖုတ်လိုးပေးလိုက်တယ်
အားးးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် အားးး လိုးပါ အားးး အင့် ရော့ ရော့ အားးး နာရီဝက် ကျော်ကျော်လောက်ထိ လိုးလိုက် ပီး လီးတံတလျောက် ကျင်တက်လာကာ ပီးချင်လာသလိုဖြစ်လာတယ် ။ အားးအားး ကိုကြီး ပီးတော့မယ် အားးးး ဇင်ဇင့် စောက် ဖုတ် ထဲမှ လီးတံ ကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပီး ကုတင်ပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ် ထ ..နှစ်ယောက်လုံး ဒူးထောက်ထားလိုက် မျက်နှာ ပေါ် လရေ ပန်ပေးမယ် ပြောလိုက်တော့ ဇင်ဇင်ရောသက်မွန်ပါ နှစ်ယောက်သား ဒူးထောက်ထိုင်ကာ ပါးချင်းအပ်လျက် ကျွန်နေ်ာ့ လီးတံရှေ့မှာ လျှာလေး တွေ ထုတ်ထားကြတယ် စောက်ရည်တွေ ဖြင့်ချောမွတ်နေတဲ့ လီးတံကြီးကိုကိုင်ကာ ဇင်ဇင် နဲ့ သက်မွန် မျက်နှာရှေ့မှာ လေးငါးချက် ဂွင်းတိုက်လိုက်တာ နဲ့ လရေတွေ ဖျောခနဲ ဖျောခနဲ သက်မွန်နဲ့ ဇင်ဇင့် မျက်နှာတွေပေါ်ကိုပန်းထွက်ကုန် တော့တယ် ။
အားးး အားးးအူးးးးးးး ထွက်ပီ အားးးး ကျွန်နော့် ဥလေးတွေကို လှမ်းကိုင်ရင်း ဇင်ဇင်က ကျွန်နော့် လီးတံကြီးမှ လရေတွေကို စွဲစုပ် တောတယ် ။ နှစ်ယောက်လုံး မျက်နှာပေါ်မှာ လရေဖြူပျစ်ပျစ်တွေ ရွဲစိုကုန်တောတယ် အားးး ကိုကြီးမိန်းမ မိုး နဲ့ လိုးရတာတောင် ဒီလောက်မကောင်းဘူးကွာ လီးတံကို ဇင်ဇင့် ပါးစပ်ထဲမှာ ချွတ်ကာ ကုတင်ပေါ်တွင် ဒူးတွေညွတ်ကျကာ လှဲချလိုက်ရင်းပြောလိုက် တယ် ဇင်ဇင်နဲ့ သက်မွန်ကတော့ တစ်ယောက်မျက်နှာပေါ်တစ်ယောက် လျှာဖျားလေးများဖြင့် ပေနေသောလရေ လက်ကျန်များကို ယက်ပစ်လိုက်ကာ မျိုချလိုက်ရင်း ကျွန်နော်ဘေး တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် လှဲလိုက်ကြတော့တယ် ။ ဇင်ဇင်လည်း အရမ်းကောင်း တယ် ယောင်္ကျားရယ် မမမိုး ပြန်မလာခင်ထိ ကိုကြီး မိန်းမ အဖြစ်နေမယ်နော် ဟိတ် … မမဇင် နော် အဲ့လို မရပါဘူး သက်မွန် လည်း နေဦးမှာပေါ့ အင်းပါ မိန်းမလေးတွေရယ် မိုးပြန်မလာခင်ထိ ဇင်ဇင်ကော သက်မွန်ကော နှစ်ယောက်လုံးကို ညတိုင်း လိုးပေး ပါ့မယ် နှစ်ယောက်လုံး ကိုကြီး မိန်းမ တွေ ပါပဲနော် သုံးယောက်သား သဘောကျစွာ ရယ်မလိုက်တယ် ဒါနဲ့ သက်မွန်က အလိုးခံ ဖူးတာလား ကိုကြီးက သက်မွန် ကို အပျိုလေးပဲ မှတ်နေတာ ဟွမ်းးးး ကိုကြီး တို့လင်မယား လိုးနေသံတွေကြားပီး မနေနိုင်လို့ ရည် စားထားပီး ခံဖြစ်ခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့် အခုမှ ကိုကြီးကို ပထမ ဆုံး ဖင်ပါခံပေးဖူးတာပါနော်
ဟုတ်လားး ဒါဆို သက်မွန်ဖင်က ကိုကြီး လီး ပထမ ဆုံး ဝင်ဖူးတာပေါ့နော် ခံလို့ကောင်းလား ဖင်လိုးတာ အင်းပေါ့ အစတော့ မ ကောင်းဘူး နာ တယ် ခံရင်း နဲ့ ကောင်းလာသလိုပဲ ဇင်ဇင်ကော ကောင်းလို့ ခံတာပေါ့ ယောင်္ကျားရယ် ဇင်ဇင် ကော လီး ဘယ် နှချောင်း ခံဖူးတာလဲ ဟွမ်း ပြောတော့မယ် ဇင်က ယောင်္ကျားနဲ့ ဟော့ဒီ ယောင်္ကျား အသစ် လေး နဲ့ နှစ်ချောင်းထဲ ခံဖူးတာပါ နော် ကဲ ဇင် တို့ ရေသွားဆေးတော့မယ် ဟုဆိုကာ ဇင်ဇင် နဲ့ သက်မွန် တစ်ယောက်ခါး တစ်ယောက်ဖက်ကာ ရေချိုးခန်းအတွင်း လှုပ်လီ လှုပ်လဲ့ ဖြင့် ဝင်သွားကြပါတော့တယ် ။ ဇင်ဇင် နဲ့ သက်မွန်ရဲ့ နောက်ကျောပြင် အလှလေးတွေကို ငေးကာ အွမ်းးးး ငါတော့ မိန်းမ ပြန်မလာခင်ထိ ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေးကို ခယ်မလေးနဲ့ ဇင်ဇင် တို့ ဖင်တွေ အဖုတ်တွေ ပါးစပ်တွေကို အားရပါးရ လိုးရင်း ကုန်ဆုံးရမှာပဲ ဟုတွေးကာ တစ်ယောက်တည်း ပြုံးမိလိုက်ပါတော့သည် …..
Categorized as အငျးဆကျ Tagged လိုးသူ ခံသူ စိတျကွညျဖွူ